မိုးမခ မီဒီယာ - MoeMaKa News & Media: June 2008
မိုးမခရဲႚ ရေဒီယိုခဵစ်သူမဵား ဆစ်ဒနီ - 29th June 2008
မိုးမခရဲႚ ရေဒီယိုခဵစ်သူမဵား ဆစ်ဒနီ ဇနြ် ၂၉၊ ၂၀၀၈မဵြိးခဵစ်ူမန်မာ၊ တယ်ရီဘတူတိုႚရဲႚ နာဂစ်မုန်တိုင်းဖြဲႚ သီခဵင်းမဵားသတင်းတိုထြာ၊ သီခဵင်းပဒေသာအိုံပညာသည်တိုႚရဲႚ လေဘေးကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းမဵာူးမင်ကငြ်းမောင်စမြ်းရည်နဲႚ မာမာအေး - အာဏာရင်ြအပေၞ အူမင်ဒေၞအောင်ဆန်းစုကည် - ၆၃ မြေးနေႚ ကောက်ိုံတ်ခဵက်မဵားစီစဉ်သူမဵား - ဦးပန်တဵာနဲႚ မိုးမခ၀ိုင်းတော်သားမဵား(ဆစ်ဒနီ)စီစဉ်သူ - ဦးပန်တဵာ၊ Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to Facebook
Reactions: Burmese Junta accuse some Burmese local artists of drug abuse
စစ်အစိုးရ ၀ါဒဖြန့်များက မူးယစ်သုံး အနုပညာရှင်များကို အမည်တပ်ပြီး ဝေဖန်မိုးမခ အထောက်တော် ၀၀၃ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၀၈ ယခင်အပတ်၊ ရန်ကုန် ဗဟန်း အထက (၂) စာသင်ကျောင်း မူးယစ်ဆေးဝါးဆန့်ကျင်ရေး ဟောပြောပွဲတွင် လက်ရှိအရေးယူခံနေရသော မူးယစ်ဆေးသုံး အနုပညာရှင်များကို အမည်များနှင့်တကွ ထုတ်ဖော်ပြောဆို ဝေဖန်သွားသည်ဟု သိရသည်။ စစ်အစိုးရ အစီအမံဖြင့် ပြုလုပ်သည့် အစိုးရကျောင်းများ၏ ဟောပြောပွဲများတွင် ထိုသို့ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်သဖြင့် ပြင်ပဂျာနယ်လောကတွင် အတည်မပြုနိုင်သေးဘဲ စောင်းပါးရိပ်ခြေပြောဆိုနေမှုများ မှန်ကန်ကြောင်း အတည်ပြုသကဲ့သို့ဖြစ်ကြောင်း သတင်းပို့သူက မှတ်ချက်ပေးသည်။ ထက်ထက်မိုးဦး၊ စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်၊ အာရ်ဇာနည် စသည့် အဆိုတော်အမည်များလည်းပါသည်ဟု ပြောဆိုကြသည်။ အတည်မပြုနိုင်သော ကောလဟာလများအဆိုအရ မှုခင်းအစမှာ နိုင်ငံတကာမူးယစ်ပုလိပ်အဖွဲ့က မြန်မာနိုင်ငံသားတဦးကို ပြည်ပတွင် ဖမ်းဆီးမိရာက အခုလို အဖမ်းအဆီးများ အရေးယူမှုများ ပြုလုပ်လာခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ မြန်မာစစ်အစိုးရအနေနှင့် လူအခွင့်အရေးကိစ္စ၊ မတရားလုပ်အားပေးကိစ္စများတွင် နာမည်ပျက်လျက်ရှိရာ၊ နာဂစ် အရေးအခင်းတွင်လည်း လူမှုရေးကယ်ဆယ်ရေး ပျက်ကွက်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်း ယခုလို မူးယစ်ဆေးဝါးနယ်ပယ်အထိ နာမည်ပျက်လာသည်ကိုမူ တတ်နိုင်သလောက် တုန့်ပြန်အရေးယူနေပုံရသည်ဟု သတင်းပို့သူက ထင်မြင်ချက်ပေးသည်။ “ နောက်ဆိုရင် နိုင်ငံတကာအကြမ်းဖက်အဖွဲ့တွေက မြန်မာပြည်မှာ အခြေစိုက်ပြီး လေ့ကျင့်ကွင်းဆင်းနေတယ်ဆိုပြီး သတင်းတွေ ဖြစ်လာရင် ဘယ့်နှယ့် လုပ်မလဲ။ အခုတောင် အဲင်အယ်ဒီပါတီရဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့ပွဲကိုတောင် ၀င်ပြီး အကြမ်းဖက်ရမ်းကားနေသေးတာကိုတောင် စစ်အစိုးရက အရေးမယူနိုင်ဘူးလေ။ အလောင်းမြေမြုတ်တဲ့လူတွေတို့၊ မုန်တိုင်းကယ်ဆယ်ရေး အလှူရှင်တွေကိုတော့ ဖမ်းလိုက်ဆီးလိုက်နဲ့ မဟုတ်ဘူးလား …” ဟု သူက မှတ်ချက်ပေးသွားသည်။
Reactions: Ni Lon Oo's challenge on Nargis
နာဂစ် ... မင်းကို စိန်ခေါ်လိုက်ပြီဖျာပုံနီလုံဦးဇနြ် ၃၀၊ ၂၀၀၈ရုတ်တရက် မမျှော်လင့်ဘဲအကြမ်းတမ်းဆုံး အရက်စက်ဆုံးလက်နဲ့တံခါးလာခေါက်မင်းဘယ်သူလဲဟေ့ ... ။တို့ဘိုးဘေးလက်ထက် ပုံပြင်တောင်မရှိခဲ့ဘူးတို့ဘိုးဘွားလက်ထက် အိပ်မက်တောင်မမက်ခဲ့ဘူးတို့ဘိုးဘွားလက်ထက် စိတ်ကူးတောင်မရှိခဲ့ဘူးတို့လက်ထက်ကျမှမင်းက အဆိုးဝါးဆုံး ကျိန်စာနဲ့တို့အိမ်ပေါက် အချိန်မတော် တံခါးလာခေါက်မင်းနာမည် ဘယ်သူလဲဟေ့ ... ပြောစမ်းအို ... “နာဂစ်” တဲ့လား ... ။၁၉၈၈ ခုနှစ်ကနေ ... ယနေ့အထိတို့မျက်ရည်တွေ တသွင်သွင်ကျခဲ့တို့အသွေးတွေ တစ်ပေါက်ပေါက်စီးခဲ့ကိုဒါသ မပဋာထုံးတို့ကျောကုန်းတွေမှာတို့မျက်နှာတွေမှာတို့နှလုံးသားတွေမှာစစ်ဒဏ်ရာ ဗရပွနဲ့ဒုက္ခတွေ သုက္ခတွေ တင်းကြမ်းအနှိပ်စက်ခံရလို့မှ မဆုံးသေးမင်းက ထပ်ပြီးတို့အသွေးအသား တို့မျက်ရည်တွေနဲ့ခြေဆေးဖို့ ရောက်လာပြန်ပြီ။ရက်စက်ပါပေ့ ... နာဂစ်ရယ်ရွေးမြစ်ကမ်း ... ပြာမလော့မြစ်တန်းထိုင်ကူမြစ်တန်း ... ဖျာပုံမြစ် ... ဘိုကလေးမြစ်တိုးမြစ် ... လှိုင်မြစ် ... ပန်းလှိုင်မြစ် ... ရန်ကုန်မြစ်ဟိုင်းကြီးကျွန်း ... လက်ခုပ်ကုန်း မကျန်မင်းရဲ့ လက်သည်း ချွန်မြမြနဲ့ကုတ်ခြစ်တို့ရဲ့အရေခွံတွေကို တဗျစ်ဗျစ်ဆုပ်ခွာတို့ရဲ့အိုးအိမ်တွေကို ဖျက်ဆီးတို့သား တို့သမီး တို့ဘိုးဘွား ... တို့မိဘတို့ဆွေမျိုးမကျန် အပြုတ်နှံတိုက်ခတ်ဘယ်ရန်ငြိုးကြောင့်များအသည်းမညှာ ရက်စက်ပါ့ပေ့အခုမှ ... ကမ္ဘာမီးလောင် သားကောင်ချနင်းခဲ့ရပြီ။ကယ်ပါ ... ကူပါ ... တစာစာနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အော်ဟစ်သံမိုးထိညံခဲ့သပရွာတွေက ငိုပြီ ... လယ်တွေက ငိုပြီယာတွေက ငိုပြီ ... ဥယျာဉ်တွေက ငိုပြီအိုးအိမ်တွေလည်း ကုန်ပြီစက်ရုံအလုပ်ရုံတွေလည်း ပြိုပြီ ...ကျောင်းကန်ဘုရား ... စေတီပုထိုးများလည်း ပြိုပြီ ...ပင်လယ်ရဲ့ငိုသံဟာတို့နှလုံးသားကို ကျိန်စာတိုက်တို့ဘ၀တွေကို မီးလောင်တိုက်သွင်းပြာပူတွင်း ချောက်ကမ်းပါးထဲမင်း ဆွဲသွင်းလိုက်တာ ... တို့အသက်ထက်ဆုံးအရက်စက်ဆုံး ... ကမ်းကုန်ပါပဲလား။မင်း နှိပ်စက်သမျှမင်းပေးတဲ့ဒဏ်ရာ ဗရပွနဲ့အသက်ရှူလို့မှ မ၀ အကျဉ်းအကျပ်တွေကြားထဲမှာသောက ပင်လယ်ဝေနေရတဲ့ဆွေကွဲ ... မျိုးကွဲ ... သားတကွဲ ... မယားတကွဲနဲ့အသက်ပေါင်းများစွာစတေးခံဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ ... ဘ၀အမှောင်မိုက်နှင့်အတူ...မင်း ... မင်းနှင့်တကွသောမင်းရဲ့မုန်တိုင်းလက်ကြမ်းကြီးကိုငါ့အိမ်တံခါးပေါက်...နောက်တကြိမ်လာမခေါက်နဲ့တော့ငါ့ပြည်သူတွေက အဆင်သင့်မင်းကို တိုက်ထုတ်ဖို့ ပြင်ထားပြီဟေ့။ ။ (ပန်းချီ သရုပ်ဖော် - မမွှေး - ပြောလိုက်ပါ ပန်းချီကား၊ ပန်းချီဆရာများရဲ့ နာဂစ်ရန်ပုံငွေပွဲမှာ တင်ဆက်ခဲ့သည့် ပန်းချီကား။ ခွင့်ပြုချက် မတောင်းလိုက်နိုင်ပါ )
Reactions: Mar Mar Aye - 232
ပြောပြစရာတွေလည်း တပုံကြီးရှိသေးတယ် (အမှတ် ၂၃၂)ဧရာဝတီဖွားတဦး၏ အတွေးများမာမာအေး<?xml:namespace prefix = o />ဇွန် ၃၀၊ ၂၀၀၈မြန်မာပြည်တွင် ၂၀၀၈ ခုနှစ် မေလက ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းတိုက်ခတ်ခဲ့သောကြောင့် လူအများအပြား သေကြေပျောက်ဆုံး၊ ဒုက္ခသည်ဘ၀ ရောက်ခဲ့ရသည်။ မုန်တိုင်းတိုက်အပြီး ၁ လကျော် အကြာတွင် နယ်စွန်နယ်ဖျား မိုးရိပ်လေရိပ်အောက်မှ ဒုက္ခသည်များအား ကူညီဖေးမပေးနိုင်မှု အခြေအနေများမှာ သတင်းဆိုးများဖြင့် ပြည့်နေသည်။ ထိုဖြစ်ရပ်ကြောင့် စိုးရိမ်ပူပန်နေကြောင်း အစချီပြီး ဧရာဝတီတိုင်းဇာတိ အဆိုတော် ဒေါ်မာမာအေးက ဘီဘီစီရေဒီယိုပရိသတ်များသို့ ပြောဆိုထားသည်။၀န်ထမ်းဘ၀မှ အငြိမ်းစားဖြစ်ပြီး မွေးရပ်မြေမှ ဧရာဝတီတိုင်းသူတိုင်းသားတို့ထံ သွားရောက် သီဆို ဖျော်ဖြေခဲ့ပုံ ခရီးစဉ်အကြောင်းလည်း ပါဝင်သည်။ကိုလေးလွင်ရေးသားပြီး၊ မောင်မောင်လတ်၊ (ဒေါ်)မာမာအေးတို့ အသီးသီး သီဆိုခဲ့သော “လှိုင်းပုတ်သံကြောင့် ဗျိုင်းလန့်ပျံပြီ”၊ ဟင်္သာတထွန်းရင်၏ နာမည်ကျော် “အမေနဲ့ရွာကိုလွမ်းတယ်” စသည့် သီချင်း အပိုင်းအစများ ဖြင့်လည်း ပြန်လည် တမ်းတထားသည်။(အပြည့်အစုံ နားဆင်ရန် ဤနေရာ ကို နှိပ်ပါ။)
Reactions: Shwe Daung Gone Sayadaw hold dhamma talk at the bay
ရွှေတောင်ကုန်းဆရာတော် ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်တွင် တရားပွဲပြုလုပ်မိုးမခအထောက်တော် အမှတ် ၂ဇွန် ၃၀၊ ၂၀၀၈ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ် ဖရီးမောင့်မြို့တွင် ရွှေတောင်ကုန်းဆရာတော်၏ တရားပွဲကို ယမန်နေ့ညနေပိုင်းက ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ မြန်မာပြည်သားများ နိုင်ငံရပ်ခြားတွင် အခြေချနေကြသော်လည်း ဗုဒ္ဓဘာသာအား မမေ့လျော့ဘဲ စုဝေးရောက်ရှိလာသည့်အတွက် ၀မ်းသာကြောင်း ဆရာတော်က မိန့်တော်မူသည်။ သီလပေးနေစဉ် ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာနှင့်ပတ်သက်ပြီး အလေးအနက်ထားကြရန် မိန့်ကြားသည်။ ထို့နောက် ၁ နာရီကျော်ခန့် တရားဟောကြားခဲ့သည်။ ဖရီးမောင့်မြို့Los Cerritos Community Center တွင်ပြုလုပ်သော အဆိုပါ တရားပွဲသို့ ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်၊ ဘေးဧရိယာတွင် နေထိုင်ကြသော မြန်မာပြည်သား ၃၀၀ ခန့် တက်ရောက်ပြီး တရားနာခဲ့ကြသည်။ ရွှေတောင်ကုန်းသာသနာ့ရိပ်သာ၊ သြ၀ါဒါစရိယဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တ ပဏ္ဍိတာဘိဝံသ (photos: moemaka)
စာအုပ်ကို http://comic.irrawaddymedia.com/ တွင် ၃ ဒေါ်လာနှုန်းဖြင့် ကြည့်ရှုနိုင်သည်။ဒေါ်စုအကြောင်း သရုပ်ဖော်ထားသည့် ဂျပန်ကာတွန်းစာအုပ် အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်ထွက်ပြီဘီဘီစီ(မြန်မာဌာန)ဇွန် ၂၉၊ ၂၀၀၈ဂျပန်နိုင်ငံက ကာတွန်းဆရာ Akazu Mizuha က မြန်မာနိုင်ငံက နိုဗဲလ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရှင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အကြောင်း သရုပ်ဖော် ရေးဆွဲထားတဲ့ ရုပ်ပြကာတွန်းစာအုပ် ထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သို့မဟုတ် ခွပ်ဒေါင်း လို့ အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့ စာအုပ်ကို ဂျပန်လို အရင်ထုတ်ဝေခဲ့ပြီးတော့၊ အခုတော့ အင်္ဂလိပ်လို ဘာသာပြန် ထုတ်ဝေတာ ဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီရုပ်ပြကာတွန်းကို အခုအခါမှာ ထိုင်းအခြေစိုက် ဧရာဝတီမဂ္ဂဇင်း အင်တာနက်စာမျက်နှာကနေ ပြန်လည်ဖြန့်ဝေ ရောင်းချနေတယ်လို့ သိရတဲ့အတွက် ဧရာဝတီမဂ္ဂဇင်းက ကိုကျော်စွာမိုးကို ကိုသိန်းမြတ်က မေးကြည့်တော့ -“နိုဗဲလ်ဆုရှင်တွေအကြောင်းကို series လိုက် ဆွဲတာဗျ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကလည်း part of the series ပေါ့ဗျာ၊ အဲဒီထဲမှာ။ ဒီရဲ့ ကာတွန်းစာအုပ်ကို လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀ နှစ်ကျော်လောက်က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နိုဗဲလ်ဆုရပြီးနောက်ပိုင်းမှာ သူတို့ ဒီစာအုပ်ကို ထုတ်ခဲ့တယ်။ ဂျပန်လို ထုတ်တာပေါ့လေ။ ဂျပန်ပြည်သူတွေကြားမှာ တော်တော်လေးကို အောင်မြင်တယ်လို့ ပြောတယ်။ တော်တော်လေး လူကြိုက် များတယ်။ တော်တော်လေး အရောင်းသွက်တယ်ပေါ့လေ။ အဓိက ကတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အကြောင်းပေါ့ဗျာ။” “ဟုတ်ကဲ့။ ကိုကျော်စွာမိုးတို့ ဒီ ဧရာဝတီဝက်ဆိုက်ကနေပြီးတော့ ဒီစာအုပ်ကို တင်ပေးတယ်၊ ဖြန့်ပေးတယ် ဆိုတော့ အဲဒါက ဘယ်လိုရည်ရွယ်ချက်လဲဗျ။”“အဓိကက သူတို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၆၃ နှစ်မြောက်မွေးနေ့မှာ ဒီစာအုပ်ကို၊ အဲဒီမွေးနေ့မှာပဲ၊ ၁၉ ရက်နေ့မှာပဲ ထုတ်ချင်တာပဲ၊ announce လုပ်ချင်တာပဲ ကျနော်တို့ ၀က်ဆိုက်မှာ။ ဒါပေမဲ့ ပြင်ဆင်ရတာ(နဲ့) ၁ ရက် ၂ ရက် နောက်ကျသွားတယ်ဗျာ။ ဆိုတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ပတ်သက်တယ်၊ မြန်မာပြည်နိုင်ငံရေးနဲ့ ပတ်သက်တယ်၊ နောက်ပြီးတော့ ဂျပန်လူထုကြားထဲမှာလည်း ကျော်ကြားပြီးသား၊ လူသိများပြီးသား စာအုပ်ပေါ့ဗျာ၊ ဒါကို အင်္ဂလိပ်ဗားရှင်းနဲ့ ရောင်းတယ် ဆိုတော့ အင်္ဂလိပ်စာဖတ်ပရိသတ်ရော၊ ဗမာတွေရော ဖတ်နိုင်အောင်ပေါ့။ သူတို့ဘက်က ကမ်းလှမ်းတာဆိုတော့ ၀မ်းပမ်းတသာနဲ့ ကျနော်တို့က လက်ခံလိုက်တယ်ပေါ့ဗျာ။” “ဒီအခု ကာတွန်းက မူလက ဂျပန်ဘာသာနဲ့ ထုတ်ဝေခဲ့တယ်၊ အခု အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ ထုတ်မယ်လို့ သိရတယ်။ မြန်မာဘာသာနဲ့ ထုတ်ဝေဖို့ အစီအစဉ်မျိုးရော ရှိသေးသလား။”“လောလောဆယ်အထိတော့ မရှိသေးဘူး။ ဒါပေမဲ့ စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ အချက်တချက်က မနေ့က ဒီကာတွန်းကို ကျနော်တို့ဝက်ဆိုက်မှာ လောင့်ခ်ျ (launch) လုပ်ပြီး၊ အခု အုပ် ၃၀ ကျော် ၄၀ နီးပါးလောက် ဒေါင်းလုတ်လုပ်တာ တွေ့ရတယ်။ ဒေါင်းလုတ်လုပ်တဲ့သူအားလုံးကို ပြန်ကြည့်တဲ့အခါ ဗမာတွေ ဖြစ်နေတာ တွေ့ရတယ်။”ကိုကျော်စွာမိုးပြောတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အင်တာနက်ကနေ ၁ ခါ ဒေါင်းလုတ် ကူးယူရင် ၃ ဒေါ်လာကျမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရောင်းရငွေတွေကိုတော့ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ကူညီကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာ သုံးစွဲဖို့ ရှိတယ်လို့လည်း ဧရာဝတီ အင်တာနက်စာမျက်နှာမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to Facebook
စိုးမြတ်နန္ဒာနှင့် ဖြိုးကြီး အိမ်ထောင်သက် ၂ နှစ်ကြာခဲ့မိုးမခအထောက်တော် အမှတ် ၂ဇွန် ၂၈၊ ၂၀၀၈ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်စိုးမြတ်နန္ဒာနှင့် အဆိုတော်ဖြိုးကြီးတို့ ကွာရှင်း ပြတ်စဲပြီးဖြစ်ကြောင်း ကြေးမုံသတင်းစာ ကြော်ငြာတခုတွင် ဖော်ပြထားသည်။ ၎င်းတို့နှစ်ဦးသည် ၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင် တရားဝင် လက်ထပ်ခဲ့ပြီး ၂ နှစ်အကြာတွင် တရားဝင် ကွာရှင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းလည်း ကြော်ငြာက ဆိုသည်။ ကွာရှင်းပြီး ၇ လ အကြာတွင် စိုးမြတ်နန္ဒာ၏ရှေ့နေက သတင်းစာတွင် ကြော်ငြာလိုက်သောကြောင့် လူသိရှင်ကြား ဖြစ်သွားခြင်းဖြစ်သည်။ စိုးမြတ်နန္ဒာကို စိတ်အနှောင့်အယှက်မပေးရန် အဆိုတော်ဖြိုးကြီးအား အသိပေး တားမြစ်သည့်ကြော်ငြာဖြစ်သည်။ ဇူလိုင်လအတွက် ကြိုတင်ထုတ်ဝေသော ရုပ်ရှင်တေးကဗျာမဂ္ဂဇင်း၊ ဖိုးဝ အင်တာနက်စာမျက်နှာတို့တွင်လည်း အဆိုပါသတင်းကို ဖော်ပြထားသည်။ သို့သော်လည်း သတင်းစာကြော်ငြာတွင် ပါရှိသည့်အချက်များကိုသာ ရေးသားထားကြခြင်းဖြစ်သည်။ ရန်ကုန်မြို့ထုတ် မဂ္ဂဇင်း၊ ဂျာနယ်များတွင် နာမည်ကျော် ငွေကြယ်ပွင့်တို့၏ အိမ်ထောင်ရေးအရှုပ်အရှင်းများကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဖော်ပြလေ့ မရှိပေ။ မင်္ဂလာဆောင်ဓာတ်ပုံ (myanmarweddings dot com) ၁၃.၆.၂၀၀၈ နေ့ထုတ် ကြေးမုံသတင်းစာမှကြော်ငြာ
88 - 20 years after - The Writers
- ၈၈ အနှစ် ၂၀ -၈၈ နှင့် စာရေးဆရာများမောင်စွမ်းရည် (မှတ်ချက် - မောင်စွမ်းရည်က အဲဒီ ၁၉၈၈ သြဂုတ်လ မြင်ကွင်းကို ရေးခဲ့ပါတယ်။ အဲဒါကို ပြန်လည်ဖော်ပြပါတယ်။ ၈၈ နဲ့ စာရေးဆရာများအကြောင်းပါ။ အဲဒီလူတွေ ထဲက တချို့ တိုက်ပွဲမှာ ကျဆုံးတာ၊ ဆုံးပါးကွယ်လွန်ကြတာကလွဲလို့၊ အနှစ် ၂၀ ကြာတဲ့အထိ ထောင်သွင်း အကျဉ်းချခံနေရဆဲနဲ့ ပြင်ပလောကမှာ ရှိနေဆဲ အဲဒီလူတွေထဲက တော်တော်များများဟာ စာနယ်ဇင်းကလောင်ကို ကိုင်စွဲလျက်၊ မြန်မာပြည် ဒီမိုကရေစီရေးအတွက် ရပ်တည်ချက် မပြောင်းလဲပါ။ ဖတ်ကြည့်ပါ။) Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to Facebook
ပြည်တွင်းက ဖတ်မိသမျှ ဂျာနယ် အပိုင်းအစများဂျာနယ်ဂြိုလ် သာဂိဇွန်လ စတုတ္ထပတ် ၂၀၀၈ဇွန် ၂၇ ၂၀၀၈ စစ်တပ် ၀န်ကြီးချုပ်က သီတဂူသဲကုန်း ဆရာတော် လှူဒါန်းထားတဲ့ ဆေးရုံသုံးပစ္စည်းတွေကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးပါတယ်။ADRA Myanmar က ၀န်ထမ်းတွေက နာဂစ်မုန်တိုင်းကျစဉ် အသက်စွန့်ပြီး ကယ်ဆယ်ရေးတွေ လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ပြင်စလူက သဲမုန်တိုင်း မဟုတ်မှန်ကြောင်း သတင်းစာက ငြင်းပါတယ်။သီတဂူသဲကုန်းဆရာတော်က သတင်းစာများကတဆင့် နာဂစ်ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကို ရှင်းပြထားပါတယ်။ - ဖတ်ပါ့ -
Reactions: အောင်ဝေး - မီခဵီကန်ြေိံဦး
မစ်ရှီဂန်နွေဦး အောင်ဝေးဇွန် ၂၆၊ ၂၀၀၈ ဒီနွေဦးမှာဂျူးလိယက်ဖူးချစ်ကို သတိရသလိုယာမာဂူချီကိုလည်း သတိရတယ်။ဒီနွေဦးမှာပါဘလိုနီရူဒါကိုသတိရသလိုဒဂုန်တာရာကိုလည်း သတိရတယ်။ဒီနွေဦးမှာမဲဆောက် ဒေါင်းရင်ပြင်ကို သတိရသလိုတာမွေ ၁၆၄ လမ်းကိုလည်း သတိရတယ်။ဒီနွေဦးမှာရွှေလီက မြန်မာတန်းကို သတိရသလိုရန်ကုန်က တရုတ်တန်းကိုလည်း သတိရတယ်။ဒီနွေဦးမှာကျော်သူနဲ့ ရွှေဇီးကွက်ကို သတိရသလိုအင်ဂျလီနာဂျီုလီကိုလည်း သတိရတယ်။ဒီနွေဦးမှာချာလီချက်ပလင်ကို သတိရသလိုဇာဂနာကိုလည်း သတိရတယ်။ဒီနွေဦးမှာဘော့ဘ်ဒိုင်လန်ကို သတိရသလိုခင်ဝမ်းနဲ့ ထူးအိမ်သင်ကိုလည်း သတိရတယ်။ဒီနွေဦးမှာမော်ရဲ့ချန်ချင်းကို သတိရသလိုကိုဗဟိန်းရဲ့ မခင်ကြီးကိုလည်း သတိရတယ်။ဒီနွေဦးမှာအော့ဇဝစ်ကို သတိရသလိုစောဝေကိုလည်း သတိရတယ်။ဒီနွေဦးမှာသီးလေးသီးနဲ့ ဆေးရောင်စုံကို သတိရသလိုအဖြူရောင်သက်တံကိုလည်း သတိရတယ်။ဒီနွေဦးမှာနန္ဒာလှိူင်ကို သတိရသလိုစုစုနွေးကိုလည်း သတိရတယ်။ဒီနွေဦးမှာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကို သတိရသလိုစိုးမြတ်မင်းတို့ ဘဏ္ဍာအခွန်ကိုလည်း သတိရတယ်။ဒီနွေဦးမှာဗန်ဂိုးရဲ့ဆိုက်ပရပ်စ်လမ်းကို သတိရသလိုတောင်ကြီးမြို့ က ချစ်သူလမ်းကြားကိုလည်း သတိရတယ်။ဒီနွေဦးမှာငုယင်ဗန်ထရွိုင်းကို သတိရသလိုဗိုလ်ကြီးအုန်းကျော်မြင့်ကိုလည်း သတိရတယ်။ဒီနွေဦးမှာမစ္စစ္စပီကို သတိရသလိုဧရာဝတီကိုလည်း သတိရတယ်။ဒီနွေဦးမှာခရစ္စတီးနားရဲ့ ကမ္ဘာကို သတိရသလိုမြောက်ဒဂုံကအိမ်ကလေးကိုလည်း သတိရတယ်။ဒီနွေဦးမှာဆရာတင်မိုးကို သတိရသလိုမန္တလေးကိုလည်း သတိရတယ်။ဒီနွေဦးမှာပဒိုမန်းရှာလားဖန်းကို သတိရသလိုကြွက်နီကိုလည်း သတိရတယ်။ဒီနွေဦးမှာအင်တာနေရှင်နယ်သီချင်းကို သတိရသလိုနတ်ရှင်နောင်သီချင်းကိုလည်း သတိရတယ်။ဒီနွေဦးမှာဂက်တီးစဘတ်မိန့်ခွန်းကို သတိရသလိုယင်အန်းမိန့်ခွန်းကိုလည်း သတိရတယ်။ဒီနွေဦးမှာဝက်သစ်ချပင်နဲ့ ဖဲကြိုးဝါကို သတိရသလိုပိတောက်ပန်းကိုလည်း သတိရတယ်။ဒီနွေဦးမှာစွန့်လွှတ်မှုကို သိရသလိုစွန့်စားမှုကိုလည်း သတိရတယ်။ဒီနွေဦးမှာငါသတိအရဆုံးကတော့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ မေလတော်လှန်ရေးပါပဲ။ ။
Reactions: Burmese Community in the Bay Aea raised 100,000 over US Dollors for Nargis Relief
ဘေးဧရိယာက မြန်မာအစုအဖွဲ့များ နာဂစ်လေဘေး ကူညီမှု ဒေါ်လာ ၁ သိန်းကျော်မိုးမခ အထောက်တော် ၀၀၂ဇွန် ၂၆၊ ၂၀၀၈ ဘုန်းကြီးကျောင်းများ၊ လူထုစုဝေးရာများတွင် မြန်မာအမျိုးသားအစုအဖွဲ့များက နာဂစ်မုန်တိုင်းလေဘေး ကူညီမှု ရန်ပုံငွေပွဲများ၊ အလှူခံပွဲများ ယခု ၂ လတာ နီးပါးအတွင်း ပြုခဲ့ကြရာ အစုအဖွဲ့အသီးသီး လှူဒါန်းမှု စုစုပေါင်း ဒေါ်လာ ၁ သိန်းကျော် ရခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်း အစုအဖွဲ့အသီးသီး၏ အင်တာနက် စာမျက်နှာများ၊ အီးမေးထုတ်ပြန်ချက်များကတဆင့် သိရသည်။ အလှူခံရရှိသမျှ အများစုကို အမေရိကန်အခြေစိုက် သာသနမောဠိ - မြန်မာရဟန်းတော်များအဖွဲ့ချုပ်သို့ လှူဒါန်းခဲ့ကြသည်ဟု ဆိုသည်။ ဖရီးမောင့်နှင့် ဟတ်ဖ်မွန်းဘေး ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများက ဆရာတော်ကြီးများ၏ မြန်မာပြည်တွင်းသို့ ပြန်လည်သွားရောက်ပြီး လေဘေးကူညီမှု ဆောင်ရွက်နေသည့် လုပ်ငန်းများကိုလည်း စေတနာရှင်မြန်မာလူမျိူးများက ၀ိုင်းဝန်း လှူဒါန်းအားပေးကြသည်ဟု သိရသည်။ ဘေးဧရိယာရောက် မြန်မာပြည်ဖွားများသည် ယခု နာဂစ်လေဘေး ကူညီရေးလှုပ်ရှားမှုတွင် တက်ကြွစွာ ၀ိုင်းဝန်းဆောင်ရွက်ကြကြောင်း၊ ဆရာတော် သံဃာတော်များ၏ လှုပ်ရှားမှုများကိုလည်း ၀ိုင်းဝန်းကြကြောင်းနှင့် ဆက်လက်ပြီး မြန်မာပြည် ဘေးဒုက္ခအသီးသီးက ကယ်ဆယ်ရေး၊ ကူညီရေးတို့ အရှိန်မြှင့် ဆောင်ရွက်နိုင်ကြရေးအတွက် အားရှိမိပါကြောင်း မိုးမခစာဖတ်သူတဦးက မှတ်ချက်ပေးပါသည်။
Reactions: မစုစုနြေး နံရံခေၝင်းနငြ့်ဆောင့်
အင်းစိန်ထောင်ရောက်မစုစုနွေး နံရံခေါင်းနှင့်ဆောင့်ဘီဘီစီ(မြန်မာပိုင်း)ဇွန် ၂၆၊ ၂၀၀၈ အင်းစိန်ထောင်မှာ အချုပ်ခံထားရတဲ့ စုစုနွေး မနေ့တုန်းက အုတ်နံရံကို ခေါင်းနဲ့ဆောင့်လို့ သတိမေ့သွားတယ်လို့ ကြားရပါတယ်။ အုတ်နံရံကို သတိမေ့တဲ့အထိ ခေါင်းနဲ့ဆောင့်ပြီး တောင်းဆိုရလောက်အောင် သူ့မှာ ဘာပြဿနာတွေများ ရှိလို့လဲ ကိုဝင်းမြင့်။ဒီလိုပါ ကိုသိန်းမြတ်ရေ၊ အင်းစိန်ထောင်တွင်း တရားရုံးမှာ မစုစုနွေးနဲ့ ဘိုဘိုဝင်းလှိုင်တို့ကို မနေ့တုန်းကပေါ့လေ၊ ရုံးထုတ်တဲ့အတွက် သူ့ရဲ့မိတ်ဆွေက သွားတွေ့တယ်။ အဲဒီမှာ ထောင်ဝန်ထမ်းနဲ့ ပြဿနာ တက်ရာကနေ မစုစုနွေးက နံရံကို ခေါင်းနဲ့တိုက်လို့ မေ့မြောသွားတဲ့အထိ ဖြစ်ခဲ့ရတယ်လို့ မစုစုနွေးနဲ့ တွေ့ခွင့်ရခဲ့တဲ့ သူ့မိတ်ဆွေ အမျိုးသမီးကြီးက အခုလို ပြောပြပါတယ်။“သမီးက ခေါင်းတွေ တအားမူးပြီး ရင်တွေ တုန်နေတဲ့အခါမှာ တံခါးကို ဖွင့်ခိုင်းတယ် အသက်ရှူလို့ မ၀လို့ တဲ့၊ သူက နှလုံးရောဂါအခံရှိတယ်လေ။ အဲဒီ ထောင်ဝန်ထမ်းက မဖွင့်ပေးဘူး တဲ့။ မဖွင့်ပေးရင်လည်း နေပလေ့စေဆိုပြီး နေလိုက်ရော။”“တအောင့်နေကျတော့ တံခါးကို ဖွင့်လိုက်၊ တော်ကြာနေ ပိတ်လိုက်နဲ့၊ ဒုန်းဒိုင်းနဲ့ လာလာလုပ်နေတယ်။ လုပ်တဲ့အခါကျတော့ အရမ်း အသက်ရှူလို့ မ၀တဲ့အခါကျတော့ ဒေါသဖြစ်တော့ ထပြောတယ်၊ ရှင်တို့ တံခါး ဖွင့်ချင်ဖွင့်ထားခဲ့၊ ပိတ်ချင် ပိတ်ထားခဲ့၊ ဒီလို ဖွင့်လိုက်ပိတ်လိုက်နဲ့ ကျမကို စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်အောင် မလုပ်နဲ့ ပေါ့။”“အဲသလို ပြောတဲ့အခါကျတော့ ဒါက ငါတို့က တာဝန်ပဲလို့ ပြောတယ် တဲ့၊ တံခါးကြီးကို ဒုန်းဆို ပြန်ပိတ်သွားတယ် တဲ့၊ နင်တို့ကို စကားပြောရတာ အဖက်မတန်ဘူးပေါ့၊ အဲသလို လုပ်တယ် တဲ့။”“လုပ်တဲ့အခါကျတော့ ဒီလောက်တောင်ရှိတာဆိုပြီး စုစုနွေးက ဒီ တံခါးနံရံနဲ့ ခေါင်းနဲ့ သုံးချက်လောက် ပြေးဆောင့်လိုက်တယ်။ ဆောင့်လည်းဆောင့်ရော သူ့မှာ နှလုံးရောဂါအခံရှိတော့ သူ့ဟာသူ မထိန်းနိုင်ဘဲနဲ့ သတိမေ့သွားခဲ့တာပေါ့။ ဘေးပတ်ဝန်းကျင်က ဟို အော်ကြတာပေါ့နော်၊ ဟိုမှာ လဲသွားပြီ၊ တံခါးဖွင့်ပေး တံခါးဖွင့်ပေးအော်တာကို သူကလေ သေရင်သေပါစေဆိုပြီး အဲဒီမိန်းမက လှည့်ကိုမကြည့်တော့ဘူး တဲ့။”“၁၅ မိနစ်လောက်နေတော့ အထဲမှာ ဆူညံသံတွေ များလာတဲ့အခါကျတော့ ဆေးမှူးက ရောက်လာတာပေါ့နော်၊ ဆေးမှူးရောက်လာမှ တံခါးကို ဖွင့်ပေးတယ် တဲ့။ တံခါးဖွင့်ပေးတော့ အထဲမှာ စုစုနွေးက တောင့်နေလို့ မနည်းကို နှိပ်ယူရတယ်ပေါ့။”မစုစုနွေးက နဂိုကလည်း နှလုံးရောဂါအခံရှိတဲ့အတွက် ပြင်ပမှာ ဆရာဝန်နဲ့ ဆေးကုသဖို့ သက်ဆိုင်ရာကို တင်ထားပေမဲ့ အခုချိန်အထိ ခွင့်ပြုချက် မရတဲ့အတွက် အပြင်ကဆေးတွေပဲ ၀ယ်ပေးရတယ်လို့ စောစောက အမျိုးသမီးကပဲ ပြောပါတယ်။မစုစုနွေးနဲ့ ဘိုဘိုဝင်းလှိုင်တို့နှစ်ဦးကို နိုင်ငံတော် ဆူပူမှုဖြစ်အောင် လုပ်ကြံမှုနဲ့ ဆိုပြီးတော့ ပုဒ်မ ၃ ခု စွဲပြီးတော့ အင်းစိန်ထောင်ထဲက တရားရုံးမှာပဲ စစ်ဆေးနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to Facebook
Reactions: Hostile approach to the media in Burma
စစ်အစိုးရ၏ မီဒီယာနှိပ်ကွပ်ရေးလှုပ်ရှားမှုများ အရှိန်အဟုန်မြှင့်မိုးမခအထောက်တော် အမှတ် ၂ဇွန် ၂၆၊ ၂၀၀၈ရန်ကုန်မြို့ရှိ အင်တာနက်အသုံးပြုသူများကို အာဏာပိုင်တို့က ယခင်ကထက် ပိုမို စောင့်ကြည့်လျက်ရှိသည်။ ရန်ကုန်မြို့ အခြေစိုက် မိုးမခအထောက်တော်တဦးက “ဒီမှာ တင်းကြပ်နေတယ်။ (အင်တာနက်)ဆိုင်တိုင်းမှာ စောင့်ကြည့်သူတွေ ရှိနေတယ်။ အင်တာနက်ဆိုင်ကို ၀င်ရင် လက်မှတ်ထိုးရတယ်။ မှတ်ပုံတင် ပြရတယ်။ အချိန်မှတ်ထားတယ်။ တော်တော်မလွယ်ဘူး” ဟု ဆိုသည်။ နာဂစ်လေမုန်တိုင်းနောက်ဆက်တွဲသတင်းများကို အမှောင်ချထားလိုသဖြင့် အင်တာနက်အသုံးပြုမှုကို တင်းကြပ်ထားခြင်းဖြစ်မည်ဟု ရန်ကုန်မှ စာနယ်ဇင်းသမား အများအပြားက သုံးသပ်ကြသည်။ ယခုတင်းကြပ်မှုမှာ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က သံဃာတော်များ အကြမ်းဖက် ချေမှုန်းခံရစဉ်ကထက် ပိုမိုပြင်းထန်သည်ဟု ဆိုသည်။ အစိုးရသတင်းစာများတွင်မူ ထိုသို့ ကန့်သတ် ပိတ်ဆို့မှုများအကြောင်းကို ဖော်ပြထားခြင်း မရှိပေ။ ယခုနောက်ဆုံးတက်လာသည့် အေဂျင်စီသတင်းများတွင် နာဂစ်မုန်တိုင်းဒဏ် ခံရသူများအား ကူညီရေး လုပ်ငန်းများအတွင်း ပါဝင်ပတ်သက်သူ စာနယ်ဇင်းသမားများ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံနေရပုံကို ဖော်ပြထားသည်။ နယ်ခြားမဲ့ သတင်းထောက်များအဖွဲ့၊ မြန်မာသတင်းသမဂ္ဂတို့၏ လက်တလော ထုတ်ပြန်ချက်တစောင်ကို ကိုးကားပြီး ဖော်ပြ ရေးသားနေကြခြင်းဖြစ်သည်။ ထုတ်ပြန်ချက်တွင် Myanmar Tribune ဂျာနယ် အယ်ဒီတာ ကိုအောင်ကျော်ဆန်းအပါအ၀င် စေတနာ့ဝန်ထမ်း ၁၆ ဦးသည် မုန်တိုင်းသင့်ဒေသမှ ကျွင်းကျန်သော ရုပ်အလောင်းများကို သွားရောက်ရှာဖွေ၊ မြုပ်နှံပြီး မကြာမီ ဖမ်းဆီး ထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။ ယမန်နေ့က စစ်အစိုးရထုတ်ဝေသည့် ကြေးမုံသတင်းစာမျက်နှာဖုံးတွင် စာလုံးမည်းကြီးများဖြင့် ဖော်ပြထားသော လှုံ့ဆော်စာများ။
More photos from the relief works by Sayadaw Ashin Dhammapiya's delegation in the delta
သင်္ကန်းကျွန်း ငါးကျမ်းပြန်ကျောင်း နှင့် ဖရီးမောင့် မေတ္တာနန္ဒ၀ိဟာရ ရိပ်သာ ဆရာတော် အရှင်ဓမ္မပီယ နာဂစ်မုန်တိုင်းသင့် ပြည်သူများ ကူညီစောင့်ရှောက်ရေး ခရီးစဉ် မှတ်တမ်း ဓာတ်ပုံများဓာတ်ပုံသတင်းဇွန် ၂၅၊ ၂၀၀၈
Reactions: ဒေၞအောင်ဆန်းစုကည် - ၆၃
ဒေၞအောင်ဆန်းစုကည် - ၆၃ကဗဵာစုစည်းမြ - မင်းသုဝဏ်၊ တင်မိုး၊ မောင်စမြ်းရည်ဇနြ် ၂၅၊ ၂၀၀၈ ထောင်ူပင်ပက ထောင်သားမဵား(ဒေၞစု အသက် ၆၀ူပည့် မြေးနေႚ အမတ်ြတရ ရစ်ြလုံးဘြဲႚ ကဗဵာ) ၁။ ဒိုႚခေၝင်းဆောင်က ထောင်ကဵနေရြာထောင်ခဵတာက ကာယကိုယ်သာစိတ်ဆိံ္ဋကူပင်ပမြာသာယုံကည်ူခင်း ထောင်သငြ်းမရပၝ။ ၂။ စုကိုယုံက ယုံေုကာင်ူးပပၝစုရဲဆို ရဲုကစမ်းပၝစုကြိဲံဆြိုိဲံလိုက်ုကပၝ။ညီစေခိုင်း ပြဲတိုင်းညီုကပၝ။ ၃။ ဒိုႚအရေးက္ဘငိမ်းခဵမ်းရေးသ္ဘာငိမ်းခဵမ်းဖိုႚရေး လတ်ြလပ်ပေးပၝလတ်ြလပ်ဖိုႚရေး ညီင်္ီတ်ြရေးပၝမညီင်္ီတြ် မလတြ်ေူမာက်ိုံင်ပၝ။ ၄။ ပန်းတိုင်ကေဵာခိုင်း စိတ်႟ိုင်းဝင်ကာအတ္ဇစစ်ခင်း၊ မင်းနဲႚသူငၝဒိုႚကို ဒိုႚဖောက်၊ေူမာင်းထဲရောက်မြာလမ်းစပေဵာက်၊ ဝမ်းေူမာက်ရန်သူသာ။ ၅။ တော်လန်ြအစ၊ အိမ်တငြ်းကပၝခေၝင်းခၝူခင်းက၊ စလိုက်စမ်းပၝဦး ခဵြိး ခေၝင်းညိတ်၊ အတိတ်မူရာစနြ်ႚလိုက်ုက အစတိုက်ပြဲပၝ။ ၆။ မမနြ် မကောင်း၊ မကောင်းေူပာပၝမကောင်း မမနြ်၊ မမနြ်ေူပာပၝမမနြ် မယုံ၊ မယုံေူပာပၝယုံအောင်လိမ်၊ လိမ်ခေတ် မလတ်ြပၝ။ ၇။ သူုကည့်ဖိုႚဖိတ် မဵက်စိမြိတ်ပၝနားထောင်ဖိုႚဖိတ် နားပိတ်နေပၝသူေူပာဖိုႚဖိတ်ိံတ်ြပိတ်နေပၝလူလိမ်ကကေဋ္ဋး မစားေုကး ဘေးဖယ်ပစ်စမ်းပၝ။လူယုတ်ကပေး မယူေုကး ဝေးဝေးလက်ရြောက်ပၝ။ ၈။ အမဵားအတကြ်၊ အမဵားထက်ြပၝညီင်္ီတ်ြလက်တြဲ၊ တိုက်ပြဲဝင်ပၝမဝင် မြိဲံ မရဲ မင်း ငၝထောင်ူပင်နေူငား၊ မလပ်ြရြားမူခား ထောင်သားပၝ။ ထောင်ထဲကလူ၊ မထောက်ကူ၊ ဖောက်သူဝမ်းသာမြာ။ မေ ၁၅၊ ၂၀၀၅။ မြေးနေႚဆုတောင်းမင်းသုဝဏ်ူပည်သူႚအောင်ပန်း၊္ဘမဲဆင်ူမန်းသည်အောင်ဆန်းစုကည်၊ ရဲဇာနည်ကိုမန်ူပည်တလြာ၊ ခဵစ်သူမဵားခဲ့။ တိုႚအားတိုႚအင်၊ တိုႚအရင်ြကိုကည်႟င်ြစေသော၊ မာစေသောဟု မြေးသောနေႚမြာ၊ တိုႚသူငၝသည်မေတ္ဇာုကည်လင် ႟ငြ်႟င်ြပိုႚဒေၝင်းပဵြိအိုးဝေ တန်ြစေဖိုႚူမတ်ဆုမန်ြကောင်း တောင်ုးကစိုႚ။ ၁၉ - ၆ - ၉၀ူမတ်မနြ် ဓူဝုံကယ်တင်မိုး ဟို . . . အဝေးက မန်ြပဵပဵူမင်ရတယ်။ မုန်တိုင်းတြေ တိုက်ခဵင်တိုင်းတိုက်တိမ်တိုက်တြေ ဖုံးခဵင်တိုင်းဖုံုးကယ်တလုံးကတော့ မပေဵာက်ကယြ်။ လမ်းပေဵာက်နေသူ မန်ြသမ္တွထာဝရ လမ်ူးပနေတဲု့ကယ်။တိုႚခဵစ်တဲ့ ခေၝင်းဆောင် အလင်းရောင် ပေးနေတာကဝေးခဵင်ဝေး နီးခဵင်နီးတိုႚခရီးရဲႚ မီး႟ြးတန်ဆောင်'ဒေၞအောင်ဆန်းစုကည်' တဲ့ကယြ်။ တိုႚရဲႚ ဘဝ ထာဝရလမ်းင်္ီနြ်ူမတ်မနြ် ဓူဝုံကယ်။ (ဒေၞစု၏ ၆၁ိံစြ်ူပည့် မြေးနေႚသိုႚ)(၇-၆-၂၀၀၆)မဲဆောက် စုရဲႚ မြေးနေႚ အဓှိူာန်မောင်စမြ်းရည် ႟ိုးသာူးခင်းနဲႚ ရဲရင့်ူခင်းေူဖာင့်မတ်ူခင်းနဲႚမန်ြကန်ူခင်း။ူခင်းလေူးခင်းနဲႚ ဒိုႚရဲႚ "စု"။ ရက်စက်ူခင်းနဲႚ႟ိုင်းစိုင်ူးခင်း။ကောက်ကဵစ်ူခင်းနဲႚမြောက်မြာူးခင်း။ူခင်းလေူးခင်းနဲႚ သူတိုႚ "စစ်"။ "စု" နဲႚ "စစ်"ုကားဒိုႚူပတ်သားစိုႚ။ အမြား သမိုင်းအခဵိန်ဆိုင်းရင်သမိုင်းမြောင့်ထက် မြောင်လိမ့်မည် ယုံစိုႚ ရဲစိုႚ ဒိုႚစုကည်ဇာနည်သမီး၊ သမီးဇာနည်၊ဒိုႚိံမြ၊ ဒိုႚက ဝန်းရံမည်။ သင့်မိခင် သင့်တိုႚ ထမ်းရမည်။ ပန်းတိုင်ရောက်မဖောက်မမည်ညီုကမည်။ မေ (၈) ရက် ၂၀၀၅။ ဒေၝင်းမိခင်စု မြေးနေႚစုမောင်စမြ်းရည် အာဃာတမထားမာန်မာနမထားမေတ္ဇာပြားမြ သူရြေ႟ြူပည်သူတိုႚရဲႚ စု။ လြံစတ်ြမေုကာက်၊ ကဵည်ဆန်မေုကာက်မဖီမဖောက်၊ ဒူးမထောက်နတ်မောက်ရဲႚ ဆို၊ ဒိုႚရဲႚ စု။ သေနတ်မပၝ၊ ဓားမပၝသင်္စာမီးဒုတ်၊ သူကိုင်ဆုပ်ကဋ္ဋိုံ်ပ်တိုႚရဲႚစု။ စုရဲႚမေတ္ဇာ၊ စုသင်္စာနဲႚဗမာတဝမြ်း၊ ဘေးမသမ်းဖိုႚ္ဘငိမ်းခဵမ်းရေးဆို၊ စုရဲႚဆို။ူပည်သူႚစစ်သား၊ ဒိုႚစစ်သားနဲႚ အမဵားကောင်းမြ၊ ဒိုႚကောင်းမနြဲႚကဵန်းမာစေဆု၊ ခဵမ်းသာဆု။ဒိုႚတောင်းတမြ၊ စုတက်ြဆု။ ခပ်ြဒေၝင်းနီနီ၊ ဒိုႚစုကည်သည်သက်ရည်ြကဵန်းမာ၊ိံစ်ြရာကေဵာ်ူပည်သူႚကောင်းမြ၊ ဒိုႚကောင်းမပြေၝင်းစိုံမော်၊ သာဓုခေၞ။ေိံမြိုးတရာ၊ ပန်းတရာနဲႚလမ်ူးဖာုကည်မြေး၊ အေးစေသော်။ ဧ္ဘပီ ၃၀၊ ၂၀၀၅ ၅၄ မတ်ြလယြ်၊ မတ်ြဖယြ်၊ ကဗဵာငယ်မဵားမောင်စမြ်းရည် စုလမ်းစဉ် မကောင်းတာကို၏မကောင်းဘူးလိုႚဘူးတလုံးဆောင်သတ္ဇိေူပာင်လော့။ စုယုံကည်ခဵက်ိံလြုံးရည်တိုက်ပြဲလန်ြခက်ခဲလဲစ္ဘြဲမဲယုံကည်အောင်ရမည်။ စုရဲႚမေးခနြ်း "သင်ဘာလုပ်နေသလဲ"သင်ပဲကဋ္ဋန်ႚကိုမေးသလိုပင်သင့်ကိုသင်သာ၊ မေးလိုက်ပၝလေ"ငၝကော ဘာလုပ်နေသလဲ" လိုႚ။ စုဆိံ္ဋ လက်နက်ဆိုအပ်တိုတောင်မြ မကိုင်ေုကး။သင်္စာဦးတင်၊ စာပြဲခင်ြတူယဉြ် ဆြေးြေိံး္ဘငိမ်းခဵမ်းရေး။ (ကဵန်စစ်သားကေဵာက်စာ) "မဵက်ရည်ကိုသုတ်ိံပ်ြရည်သုတ်ထမင်းလုတ်လဲ ခံပြၝအံ့" တဲ့။ စုလမ်းင်္ီနြ် မြားတာ မြားမနြ်းသိမြားသည့် ဘက်ကို စနြ်ႚခြာပၝ။မန်ြတာ မန်ြမနြ်းသိမန်ြသည့်ဘက်မြာ ရပ်တည်ပၝ။တေဝြေကင်း၊ လက်ငင်းအောင်ူမင်မြာ။ အမုန်းတရား အုကမ်းဖက်တာူင်္ပံနာမဟုတ်။အမုန်းဖက်မြ၊ အ႟ြံးထက်ြဆုံးရက်မခဵပြ်၊ မုန်းဇာတ်ထုပ်။ မေုကာက်တရားေုကာက်႟ြံႚူခင်းမကြင်းဝေးရအောင်ဒိုႚစမြ်းဆောင်အံ့ေုကာက်အောင်ေူခာက်သူ ဖယ်ရြားစိုႚ။ မတရား ဥပဒေ မတရား ဥပဒေကဵင့်သုံးလေတိုင်ူးပည်သူတေကြ တာဝန်အရ၊ ဆန်ႚကဵင်ုက။ ကဵန်စစ်သား "ေုကာက်႟ြံႚူခင်းမကြင်းဝေးရအောင်၊ သင်ူပပေအံ့" တဲ့။ကဵန်စစ်ထီးလြိင်၊ ကေဵာက်တိုင်ကစာဖတ်မိခၝတိုင်း၊ ငၝတိုႚဦးခဵ တသသ။ ဒေၞအောင်ဆန်းစုကည်ရဲႚ မြေးနေႚမြာငၝတိုႚ အဓှိူာန်မောင်စမြ်းရည် အောင်ဆန်းစုကည် ဗမာူပည်မြာ၊ အာဇာနည်မဵြိးဒိုႚအားကိုးသူ၊ ဒိုႚယုံသူကမ္တာကရည်တူ၊ ဗမာကုကည်ူဖြူပည်သူခဵစ်တဲ့ ဒိုႚခေၝင်းဆောင်။ ဒိုႚခေၝင်းဆောင်ကိုေူဗာင်လဲ တမဵြိး၊ ခိုးေုကာင် ခိုးဝက်ြတဖုံဖဵက်နည်းစုံနဲႚ၊ ဂဠန်ြစောဝိညာဉ်စစ်တပ်ဝင်၊ နေႚစဉ်လုပ်ုကံနေုက္ဘပီ။ "မြောင်ကဵသောုကာ" - တဲ့ဗမာသမိုင်းကို၊ အ႟ိုင်းဆုံးမင်မယဉ်ဆုံးကလောင်နဲႚအမြောင် စာမဵက်ြိာံ၊ တိုးလိုက်ပၝပကော။ လုပ်ုကံသူက၊ စစ်အစိုးရဒုက္ခရောက်တာ ဒိုႚစုကည်ဒီအထဲက၊ "အာဃာတမထားပၝ" တဲ့၊ အဝၝအ့ကားတေနြဲႚကမ္တာုကားအောင်ေူဗာင်ေုကညာမဟာ အံ့ဖယြ် ပၝတကား။ မလုံခံအြောင် လုပ်ဆောင်သူကလုံခံရြေး အေုကာင်ူးပ္ဘပီး"ခေတ္ဇ ယာယီ ထိန်းသိမ်းသည်" တဲ့ယာရီ ရီစရာပလီအညာတြေ၊ ကမ္တာသ္ဘိပီယာယီမြာ၊ နာရီမရြိတနာရီ၊ိံစ်ြနာရီ၊ သုံးနာရီလားတရက်ိံစ်ြရက် သုံးလေးရက်လာူးပက္ခဒိန်မလနြ်၊ တသက်လိမ်ဉာဏ်မနက်ဖန်္ဘပီး မနက်ဖန်။ ယာယီ ယာယီနဲႚတာရည်ြဖမ်း္ဘပီ၊ တာရည်ြမလတ်ြတာဝဋ်ုကမ္ထာကို၊ ဗမာူပည်သားခံစားနစ်နာ၊စစ်အာဏာရငြ်၊ သမိုင်းစဉ်သူႚကေ့းတင်၊ ကေ့းဆပ်ဖိုႚသာူပင်။ ညမြာ လူသတ်ထကြ်၊ မနက်မြာ အာပတ်ေူဖအလရြေစက်၊ "လက်နက်" မကြာကမ်းေူခမြာ အပန်းေူဖသတဲ့သန်းေ႟ြ သြား္ဘပီအသားဆူဆူ၊ ခၝးပူပူ၊ အနားယူရာမြာအာဃာတမထား၊ ဆာသမ္တွ စားဘာက မအားလိုႚ၊ ဘာကနားတယ် မေုကညာထေတြလာတြေ၊ မရေမရာ၊ ဇဝေဇဝၝ။ "မကောင်းမဆြောင်၊ ကောင်းမရြောင်ညစ်အောင် စစ်ကိုထား" တဲ့ အမြား ဗေၝင်းလန်၊ တရားေူဗာင်ူးဗန် ကဵင့်နေူမင့်လေလေ၊ အ႟ူးရင့်လေလေ။ အမြားအယူ၊ မတရားသူဟာအမြားမူကို၊ လူမသိအောင်ဟန်မဆောင်ိုံင်ဟန်ဆောင်ိုံင်မလား၊ ဇတ်ြဋ္ဌကြိးစား္ဘပီးမင်းသားခေၝင်းတြေ၊ ဆောင်းဖိုႚုကံတုန်းအကုသိုလ်တုံး၊ ခေၝင်းလေးလုံးမြာတလုံးတောင်မြ ဖုံးမရမဖုံးမီက လတ်ြလိုႚကဵ။္ဘငိမ်းခဵမ်းနေရးနဲႚ ဖြံႚ္ဘဖြိးရေး ကောင်စီအက်စ် ပီ ဒီ စီအမည်ခံ္ဘပီး နောက်္ဘငိမ်းခဵမ်းရေးလဲ ပေဵာက်ဆုံး၊ဖြံႚ္ဘဖြိးရေးလဲ နောက်ဆုံးဆြေးြေိံးရေးလဲ အေုကာက်ဆုံး ဆိုတော့အကောက်ဆုံးအုကံနဲႚ၊ ရန်လိုရမ်းကား၏လူသတ်သမားကို၊ ဟန်ႚတားတနြ်းလန်ြဇြဲမာန်မခဵ၊ အံတုကစိုႚ။ိုံဘယ်ဆုရင်ြကို ထောင်သငြ်းတောတငြ်းက ဆင်ကို ပလ္ထင်ပေၞတင်အူမင်မလေဵာ်၊ ဆင်တော် ယုတာခေဵတော့ဗမာတြေ ကံဆိုး၊ုကံ႟ိုး႟ိုးကို ဆင်ဝၝးသလိုပား္ဘပီးသားဘမ်း၊ ဆင်နင်းခန်းမြာဘမ်းဟာ ဘမ်းထက်၊ အုကမ်းဖက်လဲဆက်္ဘပီူးပားစရာ မရြိပၝ္ဘပီ။ ဓား လြံ လေူးမား၊စြဲကိုင်မထား၊ မိန်းမသား။သေူပပန်းနဲႚ၊ ရေခဵမ်းအိုးသာအားကိုးအားထား၊ မိန်းမသား။ခဵြိူးဖတြဖက်၊ ဒေၝင်းတဖက်သာလက်႟ုံးအားထား၊ မိန်းမသား။ ဒီမိန်းမသားကိုခဵြုံကားကထကြ်၊ လက်နက်ဓားလြံလူဆိုးတေရြံ၊ စီမံကိန်းခဵလုပ်ုကံရရြာ၊ စစ်ဗဵဟြာကိုဘယ်မြာ သင်ခဲ့ပၝသတုံး။ အို . . . ဗိုလ်ခဵပြ် အပေၝင်းဘီလူးခေၝင်းတိုႚဘောင်းဘီဂုဏ်ထောက်၊ မေုကာက်တတ်ရင်နောက်ထပ်မဖမ်းဘဲဆြေးြေိံးပြဲခငြ်၊ ဝင်ရဲပၝမိန်းမလဵာဥာဉ်၊ူပင်ရဲပၝသေနတ်မကိုင်၊္ဘပိင်ြရဲပၝ။ မစုလက်မြာ၊ ဘာမမြရြိငၝတိုႚဆီမြာ၊ ဘာမမြရြိဒိုႚမြာရြိတာ၊ သတ္ဇိပၝပဲဒိုႚမြာရြိတာ၊ သီလပၝပဲူပည်သူႚသီလ၊ "စု" သီလဟာ တပၝးသာ . . .မကောင်းတာကို၊ မကောင်းဘူးလိုႚ"ဘူး" တလုံးဆောင်၊ သတ္ဇိေူပာင်သူ။ မကောင်းတာကို၊ ကောင်းသယောင်နဲႚသေနတ်ကိုထောင်၊ သတ္ဇိေုကာင်သူ။ ဘယ်သိူိုံင်႟ိုး ရြိသလဲသမိုင်းကိုပဲ၊ မေးရဲမေးလော့ပေးတဲ့အေူဖ၊ုကားရဲစေ။ ဒီမိုကရေစီ သီလတခု၊ လက်စြဲူပစြိုႚမန်ြရာစကား၊ေူပာုကာုးကစိုႚဒေၞစုနောက်က၊ ဒိုႚနောက်ုကစိုႚဒေၞစုရြေႚက၊ ကာကယြ်ုကစိုႚဒေၞစုဘေးက၊ ဝန်းရုံကစိုႚ။ဗိုလ်ခဵပ်ြတစု၊ မကောင်းမတြေကြုဋာကုဋေကို၊ဗမာတေူပလုံး ဟန်ႚတားစိုႚ။ကမ္တာတေူမလုံူးပန်ုကားစိုႚ။ မကယ်ြမထောင့်၊ေူဖာင့်ေူဖာင့်ရဲရဲဦးလည်မသုန်၊ ရင်မခုန်ဘဲမဖည်မဖောက်၊ နောက်မခဵန်ဘ္ဘဲမ္ဘဲမဲူမူံမံ၊ အဓှိူာန်နဲႚ"စု" င်္ီန်ြတဲ့လမ်း၊ "ဆန်း" မ္တွော်တဲ့ဆီဆက်လက်ခဵီစိုႚ၊အောင်ဆန်းစုကည်၊ အောင်ရမည်။ ဒီနေႚ"စု" မြေးနေႚပၝ၊မြေးနေႚတရာ ဆုတောင်းပၝစိုႚ။ အောင်ပြဲတရာ ဆင်ြိဲံပၝစိုႚ။မေတ္ဇာပိုႚအံ့။ဒိုႚရဲႚ စုကည်၊အသက်ရည်ြစြာ၊ အနာမဲ့လ္တွက်ခဵြိးဖဲ့ြေိာံင်ဋ္ဌကြိး၊ ရြေႚသိုႚတိုး၍ဘမဵြိးဘိုးတူ၊ အောင်ပြဲယူကာူပည်သူလတြ်ေူမာက်ိုံင်စေသော်။ မကောင်းမမနြ်၊ ဖောက်ူပန်သူတေလြူသတ်အုကမ်းဖက်၊ ရက်စက်သူတေလြက်နက်အားကိုး၊ ဆိုးသမြ်းသူတေအြာဏာငန်းဖမ်း၊ ရမ်းကားသူတေစြည်းစိမ်ကိုမက်၊ူပည်ဖဵက်သူတေဒြင်းတိုႚတတြေ၊ နေဝင်ခဵိန်မြာသိပ်မုကာတော့သင်္စာဂၝထာ၊ ႟တြ်ုကပၝအံ့အာဏာသူရဲတြေ၊္ဘပိလြဲ ဒူးတုန်ေူပုးကကုန်။ေုသာင်း . . . ဒူရေ ဒူရေ သြားဟုန်ဟုန်။ ဇနြ် ၁၉၊ ၂၀၀၃ဖိုႚတဝိန်း။
မင်းအလှ ခဏ ငှားပါရစေအရှင်ဉာဏိကဇွန် ၂၄၊ ၂၀၀၈နံနက်စောစော လမ်းလျှောက်တဲ့အခါတိုင်း Good Morning! ဒါမှမဟုတ် Morning! ဆိုတဲ့ နှုတ်ဆက်စကားကို မျက်နှာချင်းဆိုင် လျှောက်လာသူ၊ ပြေးလာသူတွေဆီကဖြစ်စေ၊ နောက်ကနေ ကိုယ့်ကို ဖြတ်ကျော် ပြေးသွားသူတွေဆီက ဖြစ်စေ၊ အိမ်ရှေ့မြက်ခင်းစိမ်းစိမ်းတွေကို ရေလောင်းနေသူတွေဆီကဖြစ်စေ၊ အလုပ်သွားဖို့ ကားပေါ်တက်လုဆဲဆဲသူတွေဆီကဖြစ်စေ၊ အမြဲလိုလို ကြားရတတ်တယ်။ သူတို့က ဦးရင် သူတို့က နှုတ်ဆက်၊ ကိုယ်ကဦးရင် ကိုယ်ကဆက်။ သစ်လွင်လန်းဆန်းတဲ့ နေ့သစ်တနေ့အတွက် ခွန်အားသစ်တို့ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ လှပတဲ့ယဉ်ကျေးမှု အစဉ်အလာကောင်း တခုပေါ့။ ဒီလို နံနက်ခင်းမှာ ကြားလိုက်ရတဲ့ Morning! ဆိုတဲ့အသံဟာ အခြားအချိန်များမှာ ကြားတတ်တဲ့ နှုတ်ဆက်စကားထက် ပိုပြီး သာယာတယ်၊ စိတ်ကို ရွှင်လန်းစေတယ်လို့လည်း ထင်မိတယ်။ ဒီလို နှုတ်ဆက်စကား ကြားရတဲ့ နေ့မျိုးမှာ အစစအရာရာ တနေ့တာ လုပ်ရသမျှ ပိုမို ချောမွေ့ အဆင်ပြေတတ်တယ်လို့လည်း အစွဲတစ်ခုဖြစ်နေသလို ခံစားမိတယ်။ နောက်ပြီး မှားမလားတော့ မဆိုနိုင်ဘူးပေါ့။ နံနက်စောစော လမ်းလျှောက်တတ်သူတွေဟာ အခြားသူတွေထက် ဝီရိယ အားကောင်းသူတွေလို့လည်း မှတ်ယူထားမိတယ်။ ဒါကပဲ နံနက်စောစော လမ်းပေါ်မှာ တွေ့ရသူတွေကို အလိုလို လေးစားမိရခြင်း အကြောင်း ဖြစ်နိုင်သလို ဒီကတဆင့် သူတို့တွေရဲ့ နှုတ်ဆက်စကားသံကလည်း ပိုမို ချိုမြနေသလို၊ ကျက်သရေ ရှိနေသလို ခံစားရဖို့ အကြောင်းလည်းပဲ ဖြစ်မယ် ထင်တယ်။ခေတ်သစ်လူ့အဖွဲ့စည်းများမှာ အမျိုးမျိုးသော ဖျော်ဖြေရေးအစီအစဉ်များရဲ့ ဆွဲငင်မှု၊ မပြီးဆုံးနိုင်တဲ့ လုပ်ငန်းအဝဝရဲ့ ဖိအားကြောင့် အများစုသော သူတွေက ညဉ့်နက်မှ အိပ်လေ့ရှိတတ်တာ။ ဒီတော့ နံနက်စောစော အိပ်ရာထသူဆိုတာက အနည်းသား။ အလုပ်စောစော သွားရမယ့်သူတွေ၊ ကျောင်းစောစော သွားကြရမယ့်သူတွေလောက်ပဲ မဖြစ် မနေ လူးလဲထတတ်ကြတာ။ ပုံမှန်အားဖြင့် နံနက်စောစော အချိန်တွေမှာက လမ်းတွေပေါ်မှာ၊ ဈေးဆိုင်တွေမှာ ကားရှင်း လူရှင်း၊ မြင်ကွင်းတွေလည်း ရှင်းလင်းလို့။ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကို နှစ်သက်တတ်တဲ့ ကိုယ့်အဖို့ ဒါသည်ပင် တကဲ့ကိုမှ စိတ်ကြည်နူးစရာ၊ နှလုံးရွှင်ပြုံးစရာ။ကိုယ်က အခြားနေရာမှာသာ ဝီရိယ မကောင်းတာ။ ငါးနာရီ မထိုးမီအိပ်ရာထရတဲ့ အလေ့အကျင့်က အသားကျနေပြီမို့ ဘယ်အရပ်ပဲရောက်ရောက် နံနက်ပိုင်းဆိုရင်တော့ ၆ နာရီလောက်ရောက်ရင် အိပ်ရာထဲမှာ ဆက်နေလို့ မရလောက်အောင်ကိုပဲ ဖြစ်နေတတ်ပြီ။ ဒီတော့ နံနက်စောစော အိပ်ရာထရတာ အသားကျနေတဲ့သူအဖို့တော့ ခုလို ငြိမ်သက်စွာ အေးချမ်းနေတတ်တဲ့ နံနက်ခင်းမှာ လတ်ဆတ်စွာ တိုက်ခတ်လာတဲ့ လေပြေညင်းနဲ့အတူ မျောလွင့် ပါလာတတ်တဲ့ Early Bird လေးများရဲ့ ချိုမြမြသံသာသာ သီချင်းတို့ကို ကံကောင်းလှစွာ ပြည့်ပြည့်ဝဝ ခံစားခွင့်ရလေ့ရှိတတ်တာကပင် နံနက်ချိန်ခါ မင်္ဂလာဖြစ်လို့နေတယ်။စာရေးသူ နေထိုင်တဲ့ အရပ်မှာ ပန်းတွေက အစွမ်းကုန်ပွင့်တတ်ပေမယ့် အေးတဲ့ရာသီနဲ့ နည်းပါးတဲ့နေရောင်ခြည်ကြောင့်ထင့်၊ အနံ့ကောင်းကောင်း သင်းလေ့မရှိပါဘူး။ ပင်လုံးညွတ် ပွင့်နေတဲ့ နှင်းဆီရုံကြီးတွေဘေးမှာ ဖြတ်လျှောက်တာတောင်မှ နှင်းဆီနံ့သင်းသင်းလေး ရလေ့မရှိပါဘူး။ သို့ပေမယ့် နံနက်စောစော အချိန်များမှာတော့ ရေမြေလေ သဘာဝတွေက သန့်ရှင်းလတ်ဆတ်နေသေးတာရယ်၊ ပန်းရနံ့လေးတွေကို ခိုးယူတတ်တဲ့ အခြားအညစ်အကြေး လေဆိုးတွေနဲ့ ပန်းရနံ့ကို မျှဝေ မယူရသေးတာရယ်ကြောင့်ဖြစ်မယ်။ အိမ်ရှေ့တွေမှာ စိုက်ထားတဲ့ ပန်းလှလှလေးတွေရဲ့ ညင်းဆဆပေမယ့် သင်းမြမြ ရနံ့လေးတွေကို ပြည့်ပြည့်ဝဝ ရလေ့ရှိတယ်။ ဒီသင်းမြမြ ရနံ့လေးတွေနဲ့အတူ မြက်ခင်း စိမ်းစိမ်းတွေကို ဖျန်းပက်ပြီးစ ရေငွေ့နဲ့အတူ ပါလာတတ်တဲ့ မြက်စိမ်းရနံ့လေးတွေကိုလည်း ရှိုက်ခွင့်ရတယ်။ ဒါကြောင့် စိတ်ကို လန်းဆန်း တက်ကြွ ဖြစ်စေရတယ်။မကြာခဏ လျှောက်ဖြစ်တတ်တဲ့ ရပ်ကွက်လေးတခုရှိတယ်။ ဒီရပ်ကွက်လေးထဲမှာပဲ တစ်ကွင်းလုံး စိမ်းလန်းနေတဲ့ မြက်ခင်းပြင်တခုနဲ့ ပန်းခြံလေးတခုလည်းရှိတယ်။ နံနက်စောစော အချိန်များမှာ ကားရှင်းရှင်း လူရှင်းရှင်းမို့ ထင်ရဲ့၊ လမ်းမဘေး ရပ်ကွက် ပန်းခြံထဲက ရှဉ့်ငယ်လေးတွေက လမ်းမပေါ် ထွက်ထွက်လာတတ်တယ်။ တခါတရံများမှာဆို လမ်းမ အလယ်တည့်တည့်မှာ ဆောင့်ကြောင့် ထိုင်ပြီး သစ်သီးလေးတွေကို လက်နှစ်ဖက်နဲ့ ကိုင်ကာ အားရပါးရ စားနေ တတ်တာကို တွေ့ရတတ်တယ်။ တကောင်မက နှစ်ကောင်မက၊ အကောင်များစွာ။ လိုက်တမ်းပြေးတမ်း ကစားနေတတ်တဲ့ ရှဉ့်ငယ်လေးတွေကို ငေးပြီးတောင် ရပ်ကြည့်နေမိတဲ့အခါရှိတယ်။ ကိုယ့်လိုပဲ ရပ်ကြည့်နေတတ်တဲ့ အဖိုး အဖွားအို စုံတွဲကိုလည်း အမြဲနီးပါး တွေ့ရတတ်တယ်။ဒီအရပ်မှာက ရှဉ့်လေးတွေကို ရန်မူမယ့်သူ၊ အနှောင့်အယှက် ပေးမယ့်သူ ဘယ်သူမှ မရှိဘူးလေ။ လမ်းလျှောက်နေသူတွေဟာ သူတို့ကို ရန်မူမယ့်သူတွေ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ ရှဉ့်လေးတွေကလည်း သိနေတဲ့အတိုင်းပဲ။ တခါခါမှာတော့ လက်တစ်ကမ်းလောက်အထိ ရောက်လာတတ်တယ်။ ထိုင်နေ၊ ရပ်ကြည့်နေတဲ့သူကိုတောင်မှ ပတ်ချာဝိုင်းကာ လိုက်တမ်းပြေးတမ်း ကစားနေတတ်သေးတယ်။ တခါတရံမှာတော့လည်း ရှေ့တည့်တည့်ကို ရောက်လာပြီး ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်ကာ မျက်နှာကို စေ့စေ့ကြည့်လို့ ကွိကွိ ကွကွနဲ့ စကားဆိုနေတတ်ကြသေးတယ်။ သူတို့ ပြောတာ နားလည်နိုင်ဖို့ သူတို့ ဘာသာစကားကိုတောင် လေ့လာရမလို ဖြစ်နေပြီလို့တောင် ကြံကြံဖန်ဖန် အတွေးပေါ်မိတတ်တယ်။ရပ်ကွက်ထဲနေသူအချို့ကတော့ နားလည်ဟန်ပါ။ ဒီအနီးအနားရောက်တာနဲ့ ကားကို အရှိန်လျှော့ပြီး ဖြေးဖြေးသာသာ မောင်းတတ်ကြတယ်။ ရှားရှားပါးပါး ပေါ်လာတတ်တဲ့ ရပ်ဝေးက ရောက်လာတတ်သူတွေကတော့ ဒီလမ်းပေါ်က ရှဉ့်ငယ်လေးတွေအကြောင်း မသိကြလို့ ကားကို ပုံမှန်အရှိန်နဲ့ မောင်းတတ်ကြတယ်။ ဒီအခါမျိုးမှာ လမ်းပေါ်ထိုင်နေတတ်တဲ့ ရှဉ့်ငယ်လေးတွေကိုများ တိုက်မိလေမလားလို့ မနေနိုင် မထိုင်နိုင် ပူပင်မိရသေးတယ်။ သို့ပေမဲ့ နှစ်ပေါင်း တော်တော်ကြာလာတဲ့အထိ တခါမှ ရှဉ့်ငယ်လေးတွေကို ကားတိုက်မိတာ မတွေ့မိဘူး။ လမ်းမပေါ်က ရှဉ့်ငယ်လေးတွေကို မြင်တာနဲ့ ကားအရှိန်ကို လျှော့မောင်းကြတာကြောင့်လည်း ဖြစ်မယ်ထင်တယ်။ ကြင်နာတတ်သူတွေ ဆိုတာက ကိုယ့်ပယောဂကြောင့် သတ္တဝါလေးတကောင် သေကြေပျက်စီးရမှာမျိုးကိုပင် မလိုလားတတ်ကြပါဘူး။ဒီမနက်မှာတော့ မင်္ဂလာနဲ့ အမင်္ဂလာဖြစ်ရတဲ့ မြင်ကွင်းနှစ်ခုကို ပူးတွဲတွေ့ခဲ့ရတယ်။ ပုံမှန်ထက် နဲနဲပြင်းတဲ့ အရှိန်နဲ့ ကားတစီး ကိုယ့်ဘေးကနေ ဖြတ်ကျော်သွားတယ်။ တစ်ခုခု အရေးကြီးနေမှန်း ခန့်မှန်းမိတယ်။ ရှေ့ကိုက် ၂ဝဝ လောက်မှာ ရှဉ့်လေးတွေရှိနေတတ်လို့ သူတို့အတွက် စိတ်ပူမိလိုက်တယ်။ ကိုယ့်အပူမှ မဆုံးသေးဘူး။ ရုတ်တရက်ပဲ ဖြတ်မောင်းသွားတဲ့ကားရဲ့ ဘရိတ်အုပ်သံပြင်းပြင်း ကြားလိုက်ရတယ်။ နောက်ပြီး မောင်းနေတဲ့ ကားဦးကို ဘယ်ဖယ် ယိမ်းလိုက်၊ ညာဖက်ယိမ်းလိုက်နဲ့ ကားမောင်းသူ အလုပ်များနေတာကို မြင်ရတယ်။ လမ်းပေါ်က ရှဉ့်တစ်ကောင်ကို ရှောင်တိမ်းမောင်းနေမှန်း သိလိုက်တယ်။ ကားဦးက ဘယ်ဖက်ယိမ်း၊ ရှဉ့်လေးကလည်း ကြောက်လန့်တကြား ဘယ်တိမ်း၊ ဒီတော့ ကားဦးက ညာယိမ်း။ ရှဉ့်လေးကလည်း ညာတိမ်းနဲ့။ ကားနဲ့ ရှဉ့်လေးက ထုတ်ဆီးတိုး ကစားတဲ့အတိုင်း ဖြစ်နေတယ်။ ကားက ရှေ့ကိုနည်းနည်း တိုးသွားလိုက်၊ ကားတိုးတဲ့ဘက် ရှဉ့်လေးက တိမ်းတာကြောင့် ကားက နောက်နည်းနည်း ပြန်ဆုတ်လိုက်နဲ့ တမင်ကစားနေသလို ဖြစ်နေတယ်။နှစ်ကြိမ်လောက်စီ ဘယ်တိမ်း ညာယိမ်း၊ ရှေ့တိုးနောက်ငင်ဖြစ်နေချိန်မှာပဲ လမ်းဘေးပလက်ဖောင်းပေါ်က ရှဉ့်လေးတစ်ကောင်က ပြေးထွက်လာတယ်။ ကားနောက်ပိုင်းဖြစ်နေတာမို့ ကားမောင်းသူ မြင်လိုက်ဟန် မတူဘူး။ ဒါကြောင့် နောက်ပြန်ဆုတ်လိုက်တဲ့ ကားဘီးနဲ့ ရှဉ့်လေးကို ကြိတ်မိသွားတယ်။ နောက်နားကိုရောက်နေတဲ့ စာရေးသူက ဒီမြင်ကွင်းကို ကွက်ကွက် ကွင်းကွင်း မြင်လိုက်ရတယ်။ ဒီအတွက် ရှဉ့်လေးအတွက် စိတ်အတော် ထိခိုက်မိတယ်။ ရှဉ့်ကလေးကို တက်နင်းလိုက်တာကိုတော့ ကားမောင်းသူ သိသွားဟန်ရှိတယ်။ ကားကို လမ်းဘေးမှာရပ်ပြီး ဆင်းလာတယ်။ ဒီတော့မှ ကားမောင်းသူ မိန်းမငယ်တစ်ဦးဖြစ်မှန်း သိရတယ်။သူမ ဘာများလုပ်လေမလဲလို့ ကြည့်နေစဉ်မှာပဲ ရှဉ့်သေလေးဘေးမှာ သူမ ဒူးထောက်ထိုင်လိုက်တယ်။ လက်နှစ်ဘက်နဲ့ ရှဉ့်သေလေးကို ကောက်ပြီး သူ့လက်ဝါးနှစ်ဖက်ထဲမှာ ယုယုယယထည့်၊ ရှဉ့်သေလေးရဲ့ နှုတ်သီးဖျားကို သူ့နှုတ်ခမ်းနဲ့ တို့ထိနမ်းလိုက်တယ်။ ပါးပြင်ပေါ်မှာလည်း မျက်ရည်တွေ သွင်သွင်စီးကျလို့။ နောက်ပြီး ရှဉ့်သေလေးကို စေ့စေ့ကြည့်ကာ ရှိုက်ရှိုက်ငင်ငင် ငိုချလိုက်တာကို မြင်လိုက်ရတယ်။ တကယ့်ကိုမှ ဝမ်းနည်းတဲ့ အသွင်အပြင်နဲ့ပါ။မင်သက်ပြီး ရပ်ကြည့်နေမိတဲ့ စာရေးသူလည်း ရှိုက်ကြီးတငင် ငိုကြွေးနေသူအတွက် တခုခုတော့ ပြောမှတော်မယ် ဆိုတာ သိလိုက်တယ်။ ဒါကြောင့် မင်းမှာ အပြစ်မရှိပါဘူး။ မမြင်လိုက်လို့ ဖြစ်ခဲ့တာပဲ။ မင်းမြင်ရတဲ့ ရှဉ့်လေးအတွက် မင်းရှောင်တိမ်းမောင်းနေတာကို ကိုယ်မြင်နေရတာပဲ။ ဒီတော့ သူမက မဟုတ်ဘူး။ သူအရေးတကြီး အမြန်မောင်းတဲ့အတွက် အခုလိုအဖြစ်ဆိုး ဖြစ်ရတာ။ အပြစ်မဲ့တဲ့ သတ္တဝါလေးသေဆုံးရတာ။ သူ ဘဝတစ်လျောက်လုံးမှာ သူ့ကြောင့် သတ္တဝါ တကောင်တလေမှ မသေကြေစေခဲ့၊ အနာတရ မဖြစ်စေခဲ့ဖူးဘူး။ ခုတော့ သတ္တဝါတကောင် သေဆုံးသွားရပြီမို့ သူ့မှာ အလွန်ကြီးတဲ့ အပြစ်ရှိသွားပြီ။ ဒီအတွက် သူ့ကိုဘုရားသခင်က အပြစ်ကြီးကြီးပေးတော့မှာ သေချာတယ် တဲ့။ဒီတော့ စာရေးသူက မပူပါနဲ့၊ ဘုရားသခင်ရှေ့ရောက်ရင် မင်းမှာ ဘာမှအပြစ်မရှိတဲ့အကြောင်း ငါသက်သေခံ ပေးပါ့မယ်လို့ ရုတ်တရက် ပြောမိလိုက်တယ်။ စိတ်သက်သာရာရသွားဟန်ရှိပါတယ်။ တကယ်လားလို့ အားတက်သရော ပြန်မေးတယ်။ တကယ်ပါ။ ဘုရားသခင်ရှေ့ရောက်ရင် ကိုယ့်ကိုသာ လှမ်းတမ်းတလိုက်၊ ကိုယ် သေခြာ အ ရောက်လာခဲ့မယ်လို့လည်း ပြောလိုက်တယ်။ စိတ်သက်သာရာရစေဖို့ ရိုးရိုးပဲ ပြောလိုက်ပေမယ့် ဒီဖြစ်ရပ်နောက် ဆက်တွဲက ဘုရားသခင်ရှေ့ရောက်တယ်ဆိုဦး၊ သူက ကိုယ့်ကို ဘယ်လိုအနေနဲ့ တမ်းတမယ်၊ ကိုယ်ကလည်း ဘယ်လို အရောက်သွားနိုင်မယ်ဆိုတာ သူလည်းစဉ်းစားမိမှာ မဟုတ်သလို ပြောလိုက်စဉ်ကတော့ ကိုယ်လည်း သတိမထား လိုက်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သူကတော့ လုံးဝ စိတ်ချယုံကြည်သွားဟန်တူတယ်။ လာမယ်ဆိုတာ တကဲ့ကတိနော်လို့ သေချာအောင် ထပ်မေးခဲ့ပါသေးတယ်။ ကတိပါလို့ ကိုယ်ကလည်း ထပ်မံကတိပြုလိုက်ပါတယ်။သူ ဘယ်ကလာလို့ ကိုယ်ဘယ်နေမှန်းမသိ၊ အချင်းချင်းတွေရဲ့ နာမည်တွေကိုတောင် မသိကြတဲ့သူနှစ်ဦးရဲ့ ကတိပေး ကတိယူစကား တွေက တွေးကြည့်မယ်ဆိုရင် ရယ်ဖွယ်ရာပါ။ သို့ပေမယ့် ဒီအချိန်မှာ သူမနဲ့ စာရေးသူတို့ နှစ်ဦးကြားမှာ သတ္တဝါတဦး ဆင်းရဲဖြစ်နေတာကို မကြည့်ရက်နိုင်၊ မမြင်ဝံ့ရက် ဖြစ်နေတဲ့ ကရုဏာစိတ်၊ အသီးသီးရဲ့ရင်မှာ တူညီညာ ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုတော့ နှစ်ဦးစလုံး ကောင်းကောင်းသိနိုင်ကြပါတယ်။ရှဉ့်ကလေးကို ကားပေါ်မှာပါလာတဲ့ အဝတ်စလေးနဲ့ ကျကျနန တယုတယထုတ်ပြီး ခွင့်ပြုပါဦးဆိုကာ သူမထွက်သွားတယ်။ ကားတံခါးဖွင့်ပြီး ကားပေါ်မတက်မီမှာ ဘုရားသခင်ရှေ့ကို လာဖြစ်အောင်လာနော်ဆိုပြီး အထူးမှာကြားသွားသေးတယ်။ လာခဲ့ပါမယ်။ စိတ်ချပါလို့ ပြောလိုက်တယ်။ ပြောပြီးပြီးခြင်း ရုတ်တရက်ပဲ ဟေး ဟေး မင်းအလှ ခဏငှား နိုင်မလားလို့ နှုတ်က အလိုလို ထုတ်မေးမိတယ်။ ဘာကိုဆိုလိုမှန်း သူဘောပေါက်ဟန်မရှိဘူး။ ဒီလိုပါ၊ မင်းရဲ့သတ္တဝါတွေအပေါ် ကြင်နာတတ်တဲ့ နှလုံးသားအလှမျိုးကို တို့နိုင်ငံက လူအချို့ဆီမှာ ခဏဖြစ်ဖြစ် ပြောင်းတတ်ပေးချင်လို့ ခဏငှားချင်လို့ပါလို့ ပြောလိုက်မှ သူသဘောပေါက်သွားပုံရတယ်။ ဒီတော့မှ သူက မင်းဘယ်ကလဲလို့ မေးတယ်။ ငါ မြန်မာနိုင်ငံကပါဆိုတော့ အို သူကောင်းကောင်းသိတယ်။ မကြာမီက မုန်တိုင်းဒဏ်ခံလိုက်ရတဲ့ နိုင်ငံမဟုတ်လား တဲ့၊ မင်းနိုင်ငံသားတွေအတွက် သူ အကြိမ်များစွာ ဆုတောင်းပေးခဲ့ပါတယ် တဲ့။ နောင်လည်း ဆက်လက်ဆုတောင်းပေးပါ့မယ်၊ သူဆုတောင်းပေးတဲ့အကြောင်းကိုလည်း သူတို့တွေကို ပြောပေးပါ၊ သူ ဒီသတင်းကြားရတော့ ယူနီဆက်ကတဆင့် အလှူငွေ ထည့်ဝင်ခဲ့ပါသေးတယ်လို့လည်း ပြောပါတယ်။ ကိုယ့် ပြည်သူ ပြည်သားတွေအရေးကို အားပေးကူညီသူဖြစ်တာကြောင့် သူ့ကိုလည်း ပိုမိုလေးစားမိရတယ်။မင်း အချိန် နောက်ကျနေပြီ။ သွားဖို့အချိန်တန်ပြီလို့ သတိပေးလိုက်မှ ကားကို ဖြည်းဖြည်း မောင်းထွက်သွားတယ်။ ကားမထွက်မီမှာ “ခဏငှားလို့ ရမယ်ဆိုရင် သူ့အလှကို ရာထောင်သိန်းသောင်းမက မိတ္တူပွားပြီး ငှားပေးချင်ပါတယ်’’ ဆိုတဲ့ သူ့စကားထဲမှာပဲ ကရုဏာအလှတွေ ပြည့်လျှမ်းနေတာကို ထပ်တွေ့လိုက်ရတယ်။ သူ့ကား မြင်ကွင်းက ပျောက်သွားတဲ့အထိ မလှုပ်ရှားမိဘဲ အံ့သြငြိမ်သက်စွာ ရပ်ကြည့်နေမိတယ်။ မိနစ်ပိုင်းလေးမျှ တွေ့ရပေမယ့် သိမ်မွေ့တဲ့ သူ့စကား၊ လှပတဲ့သူ့မျက်နှာ၊ ကြင်နာတဲ့သူ့နှလုံး၊ မျက်ဝန်းမှာထင်နေတဲ့ နက်ရှိုင်းတဲ့ သူ့ရဲ့ကရုဏာ ပုံရိပ်ကြောင့် ငါလူသားတစ်ဦးနဲ့တွေ့ရတာမှ ဟုတ်ရဲ့လားလို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ပြန်မေးလိုက်မိတယ်။ဒီဃနိကကယ်၊ သီလက္ခန္ဓဝဂ်၊ သာမညဖလသုတ်မှာ ဖခင်ကိုသတ်ထားတဲ့ အမှားကြောင့် မအိပ်နိုင် မစားနိုင် အပူမီး လောင်မြိုက်ခံထားရတဲ့ အဇာတသတ်မင်းသား ဗုဒ္ဓထံပါး ဖူးမြော်ရန်ရောက်လာတဲ့အကြောင်း မိန့်ကြားထားတယ်။ ပြည့်ဝန်းနေတဲ့လမင်းကြီးနဲ့အတူ ကြယ်တာရာတွေ အစုံခနေတဲ့ တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်ညမှာ မြတ်စွာဘုရား သီတင်းသုံးနေတဲ့ ရာဇဂြိုဟ်မြို့အနီးက ဇီဝကရဲ့သရက်ဥယျာဉ်အတွင်းရှိ ကျောင်းတော်ဆီကို အဇာတသတ်မင်း ရောက်လာခဲ့တယ်။ ထောင်ကျော်တဲ့ရဟန်းတော်တွေ ဘုရားရှင်ရှိရာဘက် မျက်နှာလှည့် လက်အုပ်ချီကာ ငြိမ်သက်စွာ ထိုင်နေကြတာ။ အေချမ်းတည်ကြည်စွာ။ အဇာတသတ်နဲ့ ရာပေါင်းများစွာသော ပရိသတ်တွေ ရောက်လာတာကိုပင် အမှတ်မပြု၊ မရှုမကြည့်။ ပကတိအေးချမ်းမှု အပြည့်။ဆိတ်ငြိမ်အေးချမ်းတဲ့ ပရိတ်သတ်အသွင်အပြင်ကိုမြင်ရတော့ အဇာတသတ်က သူချစ်ရတဲ့သား ဥဒယဘဒ္ဒမင်းသားကို သွားသတိရတယ်။ သူ့သားတော်ရဲ့ရင်ထဲမှာလည်း ရဟန်းတော်တွေ ငြိမ်သက်နေသလို ငြိမ်သက်နေစေချင်လိုက်တာ။ ရဟန်းတော်တွေ အေးချမ်းနေသလို သူ့သားတော်လေးလည်း အေးချမ်းနေစေချင်လိုက်တာ။ မြင်ကွင်း လှလှ မြင်ရတော့ ချစ်ခင်သူတွေကိုလည်း ကိုယ့်လိုပဲမြင်စေချင်တာ။ အသံသာသာ ကြားရတော့ တွယ်တာသူတွေကိုလည်း ဒီလို အသံသာလေး သောတနားဆင်စေချင်တာ။ အစားကောင်းကောင်း စားရတော့ မြတ်နိုးရသူတွေကိုလည်း ဒီလို အရသာကောင်းလေး မြည်းစမ်း စားစေချင်တတ်တာ။ ဒါက လောကသဘာဝ မဟုတ်လား။တမင်သက်သက်လုပ်တာ မဟုတ်ပါပဲ တိုက်ဆိုင်မှုအရ မတော်တဆဖြစ်သွားခဲ့တဲ့ ရှဉ့်ငယ်လေးတစ်ကောင် အသက် ဆုံးပါးသွားတာကိုကြည့်ပြီး ရှိုက်ကြီးတငင် ငိုကြွေးတဲ့ မိန်းမငယ်တစ်ယောက်၊ မိုင်ပေါင်းထောင်ချီဝေးကွာတဲ့အရပ်က လူသားတွေရဲ့ဒုက္ခကို စာနာနားလည်ပြီး ဆုတောင်းနေပါတယ်၊ ကူညီခဲ့ပါတယ်ဆိုတဲ့ မိန်းမငယ်တစ်ယောက်။ ဒီလို နှလုံးသား နူးညံ့သူတွေ၊ စာနာသနားတတ်သူတွေ၊ ရိုင်းပင်းကူညီတတ်သူတွေကို တွေ့ရတော့ ဆင်းရဲဒုက္ခ ရောက်နေကြတဲ့ ကိုယ့်ပြည်သူတွေကို သတိရမိတယ်။ ကိုယ့်ပြည်သူပြည်သားတွေကိုလည်း ခုလို နှလုံးသား နူးညံ့တဲ့၊ စာနာ ထောက်ထားတတ်တဲ့၊ ရိုင်းပင်းကူညီတတ်တဲ့ မိသားစုဝင်တွေ၊ အုပ်ချုပ်သူတွေ၊ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းတွေ၊ အိမ်နီးနားချင်းကောင်းတွေနဲ့ အများကြီး အများကြီးပဲ ဆုံစေ တွေ့စေချင်လိုက်တာ။ သူတို့ ဒုက္ခတွေက အလွန်ပဲကြီးလွန်းလှသလို အလွန်မှပဲ ရှည်ကြာလွန်းလှတယ် မဟုတ်လား။ ကမ္ဘာလောကသား အားလုံးအဖို့ အထူးသဖြင့် ဆင်းရဲကြီးစွာ တာရှည်လွန်းလှတဲ့ ကိုယ့် ပြည်သူ ပြည်သားတွေအဖို့မှာက ဒီလို စိတ်ထားကောင်းရှိသူတွေ၊ ကရုဏာရှင်တွေ၊ ဖေးဖ ကူညီမယ့်သူတွေ အများကြီး အများကြီး လိုအပ်နေတယ် မဟုတ်ပါလား။
၈၈ - အိံစြ် ၂၀
၈ ၈ - အနှစ် ၂၀(အခန်းဆက်များ)မောင်ရစ်ဇွန် ၂၃၊ ၂၀၀၈ ၂၀၀၇ သြဂုတ်လက ၈၈ အရေးတော်ပုံ ၁၉ နှစ်ပြည့်ခဲ့တယ်။ အဲဒီတုန်းမှာ ပြည်တွင်းက ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများ ထောင်ထဲက ၁၀ နှစ်ကျော် အကျဉ်းကျနေရာက တစတစ အပြင်ရောက်လာကြပြီးနောက် တစုတဝေးနဲ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က လူကြီးတွေ လူငယ်တွေနဲ့ လက်တွဲလို့ "၈ လေးလုံး ၁၉ နှစ် ဆွမ်းကျွေး" ကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။ ဘုန်းကြီးကျောင်းက သာသနာ့သိပ္ပံကျောင်းတိုက်၊ အခုအချိန်မှာ စစ်အစိုးရက ကျောင်းထိုင်ဆရာတော် ပျံလွန်ချိန်မှာ အာဏာသုံးပြီး စစ်တပ်က သိမ်းပိုက်လိုက်တဲ့ ကျောင်းပေါ့။ အခု ကျောင်းကြီးလည်း မရှိတော့ဘူး၊ အပိတ်ခံလိုက်ရပြီ။ အခု အဲဒီက ကျောင်းသားတွေ၊ လူငယ်တွေ တော်တော်များများ မရှိတော့ဘူး။ မတရားအဖမ်းခံထားရပြီ။ ၂၀၀၇ သြဂုတ်မှာ လောင်စာဆီသပိတ် ဖြစ်ခဲ့တယ်။ သူတို့တွေကို စစ်အစိုးရက ဖမ်းတယ်။ သားတကွဲ၊ အမိတကွဲဖြစ်အောင် ဖိနှိပ်ခဲ့တယ်။ ၂၀၀၇ သြဂုတ်ကတည်းက တိုင်းပြည်ကြီး အတောမသတ်တဲ့ အရေးအခင်းတွေ နေ့၊ ည ဆက်ခဲ့ရပါပြီ။ ၂၀၀၇ စက်တင်ဘာ သံဃာသပ်ိတ် အရေးတော်ပုံ၊ ၂၀၀၈ မေလ နာဂစ်ကပ်ဘေး အရေးအခင်း။ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ စစ်အစိုးရရဲ့ ဖိနှိပ်မှုများ … ၂၀၀၇ သြဂုတ် ၈ က ရှစ်လေးလုံး ၁၉ နှစ်ပြည့် အခမ်းအနား ကျင်းပခဲ့စဉ်က မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ကို ပြန်ကြည့်မိပါတယ်။ သူတို့တွေ တော်တော်များများ ပြင်ပမှာ လွတ်လပ်စွာ မရှိတော့ပါ။ သူတို့ရဲ့ ရဲရင့်တဲ့ အရုပ်၊ အသံ၊ ရုပ်ပုံလွှာတွေကို အဲဒီမှတ်တမ်းမှာ တွေ့ရတယ်။ ၁၉၈၈ ကတည်းက အိမ်တွေ၊ ကျောင်းတွေ၊ မိဘရင်ခွင်တွေကနေ လမ်းတွေပေါ် ထွက်လာပြီး ပြည်သူတွေရဲ့ အသံ၊ ပြည်သူတွေအတွက် အမှန်တရားကို ကာကွယ်ဖို့၊ မြှင့်တင်ဖို့၊ စောင့်ရှောက်ဖို့ အသက်တွေ ပေး၊ ဘ၀တွေ ပေးခဲ့ကြတဲ့ ၈၈ သူရဲကောင်းတွေ၊ သူတို့မိသားစုတွေကို အဲဒီရုပ်ရှင်မှတ်တမ်းလေးကို ပြန်လည်ကြည့်ရှုခံစားရင်း အလေးပြုလိုက်ပါတယ်။ စာဖတ်သူတို့လည်း သူတို့ကို အဲဒီ ရုပ်မြင်ထဲမှာ ပြန်ကြည့်ပါ။ ကျနော်တို့ "၈၈ - အနှစ် ၂၀" ကို အခန်းဆက် အမှတ်တရတွေနဲ့ ဆက်လက်တင်ဆက်ပါဦးမယ်။ Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to Facebook
Reactions: Nargis Hit Delta Short on Help & AID still after nearly2months
ဧရာဝတီ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသ အကူအညီများနဲ့ ဝေးဆဲမိုးမခ အထောက်တော် ၀၀၃ဇွန် ၂၃၊ ၂၀၀၈ မေလ ၃ ရက် နာဂစ်မုန်တိုင်းရဲ့ တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးသေကျေခဲ့ရတဲ့ မြန်မာပြည် မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသမှာ ယခု ၂လ နည်းပါး ရောက်ချိန်အထိ အခက်အခဲများ၊ အတားအဆီးများနှင့် ရင်ဆိုင်နေရဆဲ ဖြစ်ကြောင်း ကိုယ်ထူကိုယ်ထကူညီစောင့်ရှောက်ရေး စေတနာဝန်ထမ်းအဖွဲ့တခုက ပြောကြားပါတယ်။ ဆရာတော် သံဃာတော်များ၊ နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းများ၊ အနုပညာရှင်များ၊ လူမှုရေးအဖွဲ့များ၊ ကိုယ်ထူကိုယ်ထ စေတနာရှင်များက မညီးမညူကူညီလှူဒါန်းလုပ်ကိုင်နေချိန်မှာ နိုင်ငံတကာက ကျွမ်းကျင်တဲ့ ကယ်ဆယ်ရေး၊ ကူညီရေးအဖွဲ့အစည်းကြီးတွေကတော့ ရန်ပုံငွေများ၊ ၀န်ထမ်းအင်အား၊ ပစ္စည်းအထောက်အကူ စတာတွေ လျော့နည်းနေပြီ၊ အားနည်းနေပြီ စတဲ့ အကြောင်းပြချက်တွေကို တရားဝင်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုလာပြီဖြစ်တာကို တွေ့ရပါတယ်။ ကိုဇာဂနာ၊ ကိုဇော်သက်ထွေးနဲ့တကွ မုန်တိုင်းကိစ္စကို လူသိရှင်ကြား ထုတ်ဖော်ဝေဖန်ရဲတဲ့လူငယ်တွေကို စစ်အစိုးရက ဖမ်းဆီးနှိပ်ကွပ်လိုက်တဲ့နောက်ပိုင်း မြန်မာပြည်သူ စေတနာရှင်တွေ၊ လုပ်အားပေးတွေကလည်း စစ်အစိုးရ အနှောက်အယှက်တွေကို တရားဝင်ထုတ်ဖော်ပြောကြားပေးဖို့ အနည်းငယ် ၀န်လေးရတယ်လို့ သူတို့က ပြောခဲ့ပါတယ်။ ယခုဆိုလျင် အကူအညီမရသေးတဲ့ ဝေးလံတဲ့ ကျေးရွာတွေ၊ အရပ်တွေက အမျိုးသမီးတွေ၊ လူကြီးတွေဟာ မြို့ကြီးတွေ၊ ဆွေမျိုးသားချင်းရှိတဲ့ ဒေသကြီးတွေဆီကို ကိုယ့်ဖာသာ စွန့်စားတက်ရောက်ပြီး တိုးတိုးကြိတ်ကြိတ် အလှူခံရှာထွက်နေရတယ်လို့ အဲဒီ စေတနာဝန်ထမ်းအဖွဲ့က ပြောပါတယ်။ စစ်အစိုးရ တရားဝင်ခွင့်ပြုတဲ့ ဒုက္ခသည်စခန်း၊ အလှူခံဌာနတွေကို ၀င်ထွက်သွားလာဖို့ကတော့ သူတို့တောင်းတဲ့ သန်းကောင်စာရင်း၊ မှတ်ပုံတင်၊ သက်သေအထောက်အထား စတာတွေ၊ အာဏာပိုင်အဆင့်ဆင့်ရဲ့ ထောက်ခံစာတွေကို မတင်ပြနိုင်လို့ သူတို့ မသွားနိုင်ကြဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။ လယ်ထွန်စက်အပျက်တွေကို အာဏာပိုင်တွေက ခွဲဝေပေးတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း လယ်သမားတွေက မယူမနေရ ယူနေရတယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။ မယူခဲ့လို့ရှိရင် လယ်မလုပ်နိုင်တဲ့ ရွာတွေ၊ လယ်သမားတွေအဖြစ် သတ်မှတ်ပြီးတော့ သူတို့ကို ပြောင်းရွှေ့ပစ်တာတွေ၊ လယ်တွေ အိမ်တွေ သိမ်းတာတွေ ဖြစ်လာမှာကို စိုးရိမ်လို့လို့ သူတို့က ပြောပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ ထွန်စက်ကောင်းကောင်းတလုံးကို မြန်မာငွေ ၇ သိန်း၊ ၈ သိန်းလောက်နဲ့ ၀ယ်ပြီး သုံးနိုင်တဲ့အတွက် အဲဒီလယ်ထွန်စက်မျိုးတွေကို အချင်းချင်းလိုက်ပြီး အလှူခံတာမျိုး၊ ချေးငှားပြီး သုံးစွဲတာမျိုး လုပ်နေရတယ်လို့ သူတို့က ပြောပါတယ်။ အဲသည်မှာ လောင်စာဆီကလည်း အရေးပါတဲ့ အခန်းကလည်း ပါပါတယ်လို့ ထပ်မံ ဖြည့်စွက်ပါတယ်။ လောင်စာမရှိဘဲ သူတို့ လယ်ထွန်လို့ မရလို့ပါတဲ့။ ပထမ စစချင်းမှာ သူတို့အတွက် အစားအသောက်၊ အ၀တ်အထည်၊ ဆေးဝါး တို့ကို စီစဉ်ရကြောင်း၊ အဲသည့်နောက်မှာ အမိုးအကာနဲ့ သောက်ရေ၊ သုံးရေကို ပြင်ဆင်ပေးရကြောင်း၊ အခုအချိန်မှာတော့ လုပ်ကိုင်စားသောက်ဖို့ ကိရိယာ၊ တန်ဆာပလာများ၊ ထွန်စက်၊ မျိုးစေ့၊ လှေ၊ ပိုက်ကွန် စသည်ဖြင့်တို့ကို ရှာဖွေ စုံစမ်းပေးရကြောင်း၊ အဲဒါနဲ့ တပြိုင်နက်တည်းမှာ ပညာရေး၊ ပြန်ကြားရေးနဲ့ ဆက်သွယ်ရေးတို့ကို ရွာခံ၊ နယ်ခံ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများကို အခြေခံပြီး စီစဉ်ရတာမျိုးတွေ ရှိကြောင်း စေတနာရှင်လုပ်အားပေးအဖွဲ့တခုက ရှင်းပြပါတယ်။ ဆရာတော်ကြီးတွေဦးဆောင်တဲ့ ကယ်ဆယ်ရေး၊ ကူညီရေးအဖွဲ့တွေကတော့ ကျွမ်းကျင်သူ ပညာရှင်တွေ၊ ဆရာဝန်တွေ၊ အင်ဂျင်နီယာတွေ စတဲ့ လူတွေပါလာလေ့ရှိတာကြောင့် ပိ်ုပြီး စနစ်ကျ ထိရောက်ကြောင်း သူတို့က ထင်မြင်ချက်ပေးပါတယ်။ “ ကျနော်တို့ မြန်မာတွေဟာ သူများဆီက အလကား လက်ဖြန့်တောင်းစားတဲ့ အကျင့် လုံးဝ မရှိပါဘူး၊ မတရားလည်း သူများပစ္စည်းကို မလိုချင်ပါဘူး။ တောသူ တောင်သားတွေက ပိုပြီးတော့ ရိုးသားတယ်၊ ပြတ်သားတယ်။ သူတို့ခေါင်းပေါ်မှာ အမိုးလေး၊ အကာလေးရှိပြီဆိုရင် ကိုယ်ခြေထောက်ပေါ်ကိုယ်ရပ်ဖိ်ု့ ကြိုးစားတော့တာပါပဲ။ အဲသည်လို အကူအညီလိုနေရင်တောင်မှ တောင်းရကောင်းမှန်း မသိဘဲ၊ ကိုယ့်ကံကို ပုံချလို့ ကျိတ်မှိတ်သည်းခံ ဖြေရှင်းတတ်တဲ့ ကျနော်တို့ လယ်သမားတွေ၊ တံငါသည်တွေကို စစ်အစိုးရက မတရား အနိုင်ကျင့်နေတာ …” လို့ သူတို့က ပြောပါတယ်။
Reactions: မိုးမခရဲႚ ရေဒီယိုခဵစ်သူမဵား ဆစ်ဒနီ
မိုးမခရဲႚ ရေဒီယိုခဵစ်သူမဵား ဆစ်ဒနီ ဇနြ် ၂၂၊ ၂၀၀၈ဒိုႚခေတ် - ဇာဂနာသတင်းတိုထြာ၊ သီခဵင်းပဒေသာဧရာဝတီတိုင်းအရေူးမန်မာူပည်အရေူးဖစ်တော့မည် - ခေတ်ူပိင်ြသိန်းထီပေၝက်သမ္တွ ကမ္တာတလြာုးသစေုတးလဵနဲႚ ဆစ်ဒနီကူမန်မာူပည်လေဘေး ကယ်ဆယ်ရေးဂရုဏာတေးနဲႚကဗဵာ - ဒေၝက်တာထနြ်းအောင်၊ တယ်ရီဘတူသန်းရြေ သီပေၝ အကဵြိးပေးတူသလော - ရာဇ၀င်နောက်ခံ စကားဝိုင်းစီစဉ်သူ - ဦးပန်တဵာ၊ိံငြ်ူးမတ်ခိုင် Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to Facebook
ဖေဖော်ဝါရီဆယ့်လေးစောဝေဇွန် ၂၂၊ ၂၀၀၈အာရင်ဘက်က ပြောတယ်နာ နာခံစားတတ်မှ ခံစားမှရူးရူးမူးမူးကို ဖြစ်နေမှကြီးမြတ်တဲ့အနုပညာလို့မှူးမှုံမှိုင်းဝေစေတဲ့ ဓာတ်ပုံမော်ဒယ်မလေးရေကြီးတောင့်ကြီးမားကျမှ အသည်းကွဲတဲ့ရောဂါ တဲ့သန်းပေါင်းများစွာသော ချစ်တတ်သူများရွှေအတိချထားသောလက်များဖြင့် လက်ခုပ်တီး၍ရယ်ပါ။(မှတ်ချက် - အချစ်ဂျာနယ်တွင် ဖော်ပြခဲ့သော ကဗျာဖြစ်သည်။ ရေးဖွဲ့သူ ကဗျာဆရာစောဝေသည် အဆိုပါကဗျာကြောင့် လွန်ခဲ့သည့် ၅ လက ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီး ယနေ့တိုင် အကျဉ်းချခံနေရသည်။ )
Reactions: blogs i love to visit
ဆက်ဖတ်ချင်သော ဘလော့ဂ်များမိုးမခ စာဖတ်သူ (ဟောလိဝုဒ်)၊ စာဖတ်သူတွေ ရေးတဲ့စာဇွန် ၂၂၊ ၂၀၀၈စိုးဇေယျထွန်း http://soezeya.blogspot.com/ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် ဒွေး ကွယ်လွန်တုန်းက ဓာတ်ပုံတွေ သူ့ ထံက ဦးဦးဖျားဖျား ထွက်လာတာ မှတ်မိနေသည်။လောလောဆယ်ဆယ် နာဂစ်ဒုက္ခသည်တွေနဲ့ အတူ သူ့ ကိုတွေ့ နေရသည်။ နာဂစ်မုန်တိုင်းအလွန်မှာ သူ မြင်တွေ့ရတာတွေထဲက တချို့ ကို လှစ်ကနဲ လှပ်ပြသည်။“နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း လှိုင်းခုန်ပွဲကို ပြင်ကနုဝ ကျေးရွာလေးတွင် ပြုလုပ်ပြီး ပြင်ကနုဝနှင့် စက်လှေတစ်နာရီ ခန့် စီးရသောပြင်စလှု မြို့နယ်ခွဲမှ အစိုးရ အရာရှိများ အပါဝင် ပတ်ဝန်းကျင် ကျေးရွာများက လာရောက်ကြပြီး အချို့ဆိုလျှင် ၀ါဆိုလပြည့်နေ့ ညကတည်းက ရောက်ရှိနေတတ်သည်။ ……. ထိုလှိုင်းခုန်ပွဲကို လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်းများစွာက စတင်ပြီး နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ရိုးရာ မပျက်ကျင်းပခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင် ဒီနှစ် ၀ါဆိုလပြည့်ကျော် တစ်ရက်နေ့မှာ ကျင်းပနိုင်ဦးမှာလော ဆိုသည့် မေးခွန်းကို ကျွန်တော်မေးကြည့်တော့ .........သူချက်ခြင်း မဖြေပဲ ပင်လယ်ပြင်ကြီး ဆီသို့ ငေးကြည့်ပြီး တိတ်ဆိတ်နေသည်။ ထို့နောက် သူ လေပူတစ်ချက်ကို ၀ူး ...... ကနဲ မုတ်ထုတ်လိုက်ပါတော့သည်။”( လှိုင်းခုန်ပွဲ၊ http://soezeya.blogspot.com/2008/06/blog-post_06.html ) photo: http://soezeya.blogspot.com/2007/11/blog-post_8957.html သတင်းမုဆိုးဘ၀တုန်းက သူ့ အတွေ့ အကြုံတချို့ ကိုလဲ မချွင်းမချန် ပြန်ပြောပြသည်။“လမ်းလေးဆယ်နှင့် ဗိုလ်ချုပ်လမ်းထိပ် ရောက်တော့ ထရန်စဖော်မာကို ဗုံးခွဲထားသည်ကို တွေ့ရသည်။ ဗုံးအား သေးသောကြောင့် ထရန်စေဖော်မာကို ထိခိုက်မှု မရှိသော်လည်း ကာရံထားသည့် အုတ်ထရံများ ကျိုးပဲ့နေသည်ကို တွေ့ရသည်။ ကျွန်တော်လည်း ထိုနေရာတွင် ဓာတ်ပုံ နှစ်ပုံ သုံးပုံခန့် ထပ်ရိုက်လိုက်သည်။ …….နောက်ထပ်ကွဲ သည့်နေရာ ရွှေမြင်းပျံ စတိုးအရှေ့ (ဂျပန် သတင်းထောက် သေသွားသည့် နေရာနှင့် မျက်နှာချင်းဆိုင်) မှာကွဲခြင်း ဖြစ်ပြီး …….ရဲများက ဓာတ်ပုံ ရိုက်သွားကြောင်း ပြောတော့ ထိုသုံးပွင့်နှင့် စစ်ဗိုလ်က ပုံများကို ဖျက်ပစ်ခဲ့ဖို့ ကျွန်တော့်ကိုပြောသည်။ စောစောက တိုင်းမှုး အရှေ့တွင် ရိုက်တာတောင် ဘာမှ မပြောသည့်ဟာကို သူကလာပြီး ဖျက်ဖို့ ပြောနေတော့ ကျွန်တော်လဲ မဖျက်နိုင်ဘူးဟု ပြောလိုက်သည်။ ……..ကိုယ့်ကို ချုပ်နှောင်လိုက်ပြီဟု သိရသည့်အခါတွင် စိတ်ထဲတွင် ကျဉ်းကျပ်လာသလို ခံစားလာရသည်။ ကျွန်တော် အချုပ်ခန်းအတွင်းက သံတိုင်ကြီးများကို ကြည့်ကာ စဉ်းစားနေမိသည်။ ကျွန်တော် တကယ်ပဲ အပြစ်ကျူးလွန် မိခဲ့သလား။ ကျွန်တော်ပဲ နိုင်ငံတကာ ဥပဒေတွေကို လက်လှမ်းမမီ၍လားမသိ။ သာမန်နေရာ တစ်ခုမှာ ဗုံးကွဲတာကို ဓာတ်ပုံရိုက်ရင် ဖမ်းခံရတယ် ဆိုတာ နိုင်ငံတကာမှာတော့ ကျွန်တော်တစ်ကြိမ်မှ မကြားဖူးပါ။ မကြားဖူးပေမယ့် လောလောဆယ်တော့ အချုပ်ခန်း ၀ ကိုတော့ ကျွန်တော် ရောက်နေပြီ။ ……….”(ချိန်ကိုက်ဗုံးခြောက်လုံးနှင့် အချုပ်ခန်းထဲက နံနက်စာ http://soezeya.blogspot.com/2008/01/blog-post_16.html )“ကျွန်တော် သတင်းထောက် ဖြစ်ပြီး သိပ်မကြာခင်မှာပဲ အောင်ဆန်းကွင်းကို သွားဖို့ ဆရာက ကျွန်တော့်ကို ခေါ်သည်။ ဘာကြောင့် သွားသည်ကိုတော့ ကျွန်တော်လဲ မသိ။ ဆရာက လိုက်ခဲ့ဟု ခေါ်၍သာ လိုက်သွားခြင်း ဖြစ်သည်။ ……..ဟိုရောက်တော့ ခရာတေးဒို လေ့ကျင့်ရေး ခန်းမသစ် ဖွင့်ပွဲဖြစ်သည်။ ခရာတေး ဒိုလေ့ကျင့်ရေး ခန်းမ ဖွင့်ပွဲပြီးတော့ ခရာတေးဒို အဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဌဆိုသူက့ ကျွန်တော့် ဆရာကို လာပြီး ပြောသည် “အင်တာလေး ဘာလေး မဗျူးတော့ဘူးလား ဆရာ” တဲ့။ ကျွန်တော် အကဲ ခတ်မိ သလောက် ခရာတေးဒို ဥက္ကဌနှင့် ကျွန်တော့်ဆရာက အနည်းငယ်တော့ ရင်းနှီးပုံရသည်။ …….ကရာတေးဒို ဥက္ကဌက လူငယ်ပိုင်းပဲ ရှိဦးမည်။ ပြီးတော့ မေးလိုက်သည့် မေးခွန်းကို လိုရင်းကို မဖြေပဲ အရှည်ကြီး ဇာချဲ့ပြောနေသည်။ မေးတာကို လိုရင်း မဖြေတော့ ကျွန်တော် စိတ်ကောင်းကောင်း မရှည်။ မေးခွန်းလဲ မေးပြီးရော ကျွန်တော်က သူ့နာမည်ကို ဘယ်လိုခေါ်လဲ လို့မေးလိုက်သည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲ မေးတာလဲ ဆိုတော့ သတင်းရေးမှာ နာမည် ထည့်ရေးဖို့ မေးခြင်းဖြစ်သည်။ အဲတော့ သူက ဖြန်ဖြေသည် ဒေါက်တာ ရဲနိုင်ဝင်း။ကျွန်တော် နာမည်မေးလိုက် သည့်အတွက် ဆရာက အားနာသွားဟန် တူသည်။ လမ်းရောက်တော့ ကျွန်တော့်ကို ဆရာက ပြောသည်။ သူက ဒီလောက် နာမည်ကြီးတာ သူ့ကို မသိဘူးလားတဲ့။ ကျွန်တော်လဲ မသိမှ မသိတာ မသိဘူးဟု ပဲ ဖြေလိုက်သည်။ အဲတော့ ဆရာက ထပ်ပြောသည်။“ အဲဒါဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲ့ သားလေကွာ”“ ဘယ်က ဗိုလ်ချုပ်ကြီးလဲ”“ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ခင်ညွန့်”“သြော် . . .”ထိုခေတ်က ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ခင်ညွှန့်မှာ တန်ခိုးထွားနေချိန် ဖြစ်သောကြောင့် တစ်ကြောင်း၊ ဒေါက်တာ ရဲနိုင်ဝင်းသည် ပုဂံဆိုက်ဘာတက်၏ ဖောင်တာ ဖြစ်တာက တစ်ကြောင်းကြောင့် လူတိုင်း မသိတဲ့ သူမရှိသလောက် ဖြစ်သည်။ အနည်းဆုံးတော့ လူကို မသိကြသည့်တိုင် နာမည်ကိုတော့ ကြားဖူးကြသည်။ ထိုစဉ်က ဗိုလ်ချုပ်ကြီးသည် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဖြစ်သည် ဆိုသည်က လွဲ၍ ကျန်တာ ဘာမျှမသိပါ။တကယ်တော့ ရာထူးတိုင်း အဆင့်တိုင်းတွင် သူ့နေရာနှင့်သူ လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိကြသည်။ ထိုလုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့် အာဏာကို ကျွန်တော် ကောင်းစွာမသိပါ။ ထို့ကြောင့် ကျွန်တော်သည် သတင်းကိစ္စ မေးစရာ ရှိလျှင် ဒီတိုင်း ၀င်မေးလိုက်သည်။ ……..”(မှတ်မိသေးတဲ့ သတင်းထောက်ဘ၀က နေ့ရက်များ http://soezeya.blogspot.com/2008/01/blog-post_10.html) ဘလော်ဂါ စိုးဇေယျထွန်းက "နောက်ထပ်အမှတ်ရစာတွေကို သတိရလျှင် ဆက်ရေးပါမည်" ဟု သူ့မှတ်တမ်းအဆုံးမှာ ကတိက၀တ်ပြုထားသည်။ အမှတ်ရစရာတွေ ဆက်ဝေမျှဖို့လေးလေးစားစားတောင်းဆိုချင်ပါသည်။ သတိရစရာတွေ မေ့မသွားစေချင်။
Reactions: After Nargis, reaction from refugees at small villages
Charity Drive at small villages in Dedaye, Delta, Burma, after NarigsMoeMaKa Video, June 21, 2008 - Reaction from refugees at small villages with volunteer relief workers
9 Burmese Prominet Seniors on DASSK 63 booklet
နယူးယောက်က ပူဇော်ခံ သက်ကြီးဝါကြီး ၉ ဦးရဲ့ ဒေါ်စု ၆၃ မွေးနေ့ အမှတ်တရ စကားမှတ်တမ်း ထွက်ရှိမိုးမခ အထောက်တော် ၀၀၂ဇွန် ၂၂၊ ၂၀၀၈ သာသနမောဠိ ဥက္ကဋ္ဌ ဆရာတော် ဦးပညာဝံသကို အမှူးထားလျက် မောင်စွမ်းရည်၊ ဦးဝင်းဖေ၊ မောင်သာရ၊ ဦးခင်မောင်ကြီး၊ ဦးကျော်ဝင်း၊ ဒူးဝါး ဇော်အောင်၊ ဆလိုင်းထွန်းသန်းနှင့် ပီတာလင်းပင်တို့ကို နယူးယောက်ဒေသရောက် မြန်မာမိသားစုများက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၆၃နှစ်မြောက် မွေးနေ့ ကို ကြိုဆိုသောအားဖြင့် ယခင်အပတ်က ကန်တော့ပွဲကျင်းပခဲ့ရာ အထိမ်းအမှတ် စကားမှတ်တမ်းစာအုပ်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ ထိုစာအုပ်ကို ဒီမှာ ရယူနိုင်ပြီ ဖြစ်ပါသည်။
Reactions: Myochit Myanmar- Helpless hands -MTV
Myochit Myanmar- Helpless hands -MTVJune 21, 2008
ဒီပရင်္ဂကြည်မောင်သန်းဇွန် ၂၁၊ ၂၀၀၈ပုံပြင်ထဲက မြို့လည်းမဟုတ်ဒဏ္ဍာရီထဲက မြို့လည်းမဟုတ်ရာဇ၀င်ထဲက မြို့တစ်မြို့ပုဂံခေတ်ထဲက ရှိတဲ့ မြို့တစ်မြို့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း ၇၀၀ကျော်တည်းက ရှိတဲ့မြို့တစ်မြို့သမိုင်းဝင် မြို့တစ်မြို့။ဒီမြို့ကို ကတူးလူမျိုးတွေ တည်ထောင်ခဲ့တယ်အလောင်းစည်သူမင်းတိုင်းခန်းလှည့်လည်ရင်းမြောက်ဘက်အရပ်အရောက်အရှေ့ဘက်ကနတ်တွေ ဆိတ်ယောင်ဆောင်ရေသောက်မယ့်ဟန် မြည်သံပေးတာကို အစွဲပြုလို့ဒီမြို့ ဒီနာမည် တွင်ခဲ့ရ။အရှေ့မှာ ဧရာဝတီအနောက်မှာ ချင်းတွင်းမနီးဝေးမှာ မူးမြစ်နဲ့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေ ဖြစ်ထွန်းခဲ့တယ်။သာသနိက အဆောက်အအုံတွေပေါများရဟန်းပညာရှိ လူပညာရှိတွေ ထွန်းကားတခြားမြို့တွေနဲ့ စီးပွားကူးသန်းသွားလာဖို့ လွယ်ကူဘိုးတော်ဘုရား လက်ထက် စစ်တမ်းတွေအရအစည်ကားဆုံးမြို့ ၁၂မြို့ထဲက မြို့တစ်မြို့။အလောင်းဘုရားလက်ထက်မှာအိမ်ရှေ့စံ နောင်တော်ကြီး ဒီမြို့ကိုစားရဘိုးတော်ဘုရားလက်ထက်မှာ စစ်သူကြီး မဟာဗန္ဓုလနေမျိုးသူရ ရဲခေါင်ဘွဲ့နဲ့ ဒီမြို့ရဲ့မြို့ဝန်ဘုံခန်းပျို့ဆရာ အရှင်အဂ္ဂသမာဓိစစ်သူကြီး မဟာဗန္ဓုလမုံတိုင်ပင် ဆရာအရှင်ဝံသအတုလ ဆရာတော် အရှင်ယသမြသိန်းတန် ဆရာတော်အရှင်ဇိနအယူတော်မင်္ဂလာဦးနိုးဒါ ဒီမြို့သား ပုဂ္ဂိုလ်ကျော်တွေဒီမြို့မှာမင်းတုန်းမင်းကို ပုန်ကန်ခြားနားတဲ့ပတိမ်းမင်းသား ခိုလှုံခဲ့ဖူးတယ်ဒီမြို့ကနေကောက်ကျစ်ယုတ်မာတဲ့ မြို့ဝန်ဦးမှန်းအောက်ပြည်ကို ထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်ဒီလိုနဲ့ဒီမြို့မှာသူရဲကောင်းတွေ ပျောက်ဆုံးခဲ့ရတယ်ဒီမြို့မှာသစ္စာဖောက်တွေ အတောင်ပေါက်ခဲ့ကြတယ်ဒီမြို့မှာလူငယ်လေးတစ်ယောက်သူ့ဆိုင်ကယ် ကျပျောက်ခဲ့ရတယ်ဒီမြို့မှာအမျိုးသမီးတစ်ယောက်သေကံမရောက် သက်မပျောက်ဖြစ်ခဲ့ရတယ်ဒီမြို့မှာအံကြိတ်ရ တက်ခေါက်ရတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေ ရှိခဲ့တယ်။တစ်နေ့တော့မိုးနည်းတဲ့ ဒီဒေသဆောင်းတွင်းအခါ သမယမှာမိုးရွာဖို့မဆိုထားနဲ့မိုးအုံ့ဖို့တောင် အကြောင်းမရှိပေမဲ့ရုတ်တရက် မိုးကြီးရွာချလိုက်တယ်ဆင်ခြေရာတွေတောင်တိမ်ကောပပျောက်သွားအောင်ရွာတဲ့ မိုးမို့အညာအခေါ် ဆင်ရာတိမ်းမိုးတဲ့လေ။မုံရွာ-ရေဦးလမ်းကို ဖြတ်သန်းရင်းဒီမြို့ကို ကားပေါ်က လှမ်းကြည့်မိတဲ့အခါအတိတ်တစ္ဆေက ငါ့ကို ခြောက်လှန့်နေလေရဲ့။ ။(မှတ်ချက် - ယခုလထုတ် ချယ်ရီမဂ္ဂဇင်း စာမျက်နှာ ၇ တွင် ပါရှိသော ကဗျာ၊ သရုပ်ဖော်ပုံတို့ကို ပြန်လည်ဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည်။ အခက်အခဲများကြောင့် ကာယကံရှင်များထံမှ ခွင့်ပြုချက် မတောင်းခဲ့ပါ။)
ပြည်တွင်းက ဖတ်မိသမျှ ဂျာနယ် အပိုင်းအစများဂျာနယ်ဂြိုလ် သာဂိဇွန်လ တတိယပတ် ၂၀၀၈ဇွန် ၂၁ ၂၀၀၈ ပြည်တွင်းဂျာနယ်များ ကောက်နုတ်ချက်က သတင်းခေါင်းစဉ် စိတ်ဝင်စားစရာတွေ အများကြီးပါခင်ဗျာ။ ဥပမာ ၁ လနဲ့ ၁ ပတ် ကြာမှ “ပြည့်ခိုင်ဖြိုး” တွေက နာဂစ်သင့်ဒေသကို လူမှုရေးလုပ်ဖို့ ထွက်ခွာပါတယ်တဲ့။ လပ္ပတ္တာမြို့ပြောင်းရွေ့တည်ဆောက်မယ် … တဲ့။ မူလနေထိုင်သူတွေအပြင် အခြားလိုအပ်နေသူတွေက ကိုယ့်စာရိတ်နဲ့ လာခဲ့ကြရမယ် ဆိုပဲ။ နာဂစ်က ပရိဟိတစိတ်ဓာတ် ရုတ်တရက်မွေးဖွား၊ ပရဟိတမာရသွန် ပန်းတိုင်အထိပြေးနိုင်ရေး အရေးကြီး … တဲ့။ ဖတ်ပါ့ … ။
Reactions:ူမန်မာူပည်က မိခင်ိံငြ့်သားသမီးတြေူပန်လည်ဆုံစည်ိးိုံင်ပၝ့မလား
ူမန်မာူပည်က မိခင်ိံငြ့်သားသမီးတြေူပန်လည်ဆုံစည်ိးိုံင်ပၝ့မလားနီလာသိန်းဇနြ် ၂၁၊ ၂၀၀၈ (၁) ညနက်သန်းခေၝင်မြာ ကဋ္ဋန်မ အိပ်ရာကိုံးလာပၝတယ်။ အမန်ြကတော့ အိပ်မက်ထဲမြာ ကဋ္ဋန်မိုံးလာတာပၝ။ ပန်း္ဘခံလေးတခုထဲမြာ သမီးလေိးံငြ့် ကဋ္ဋန်မ တူတူပုန်းတန်း ကစားနေပၝတယ်။ ကဋ္ဋန်မက ပုန်းန္ဘေပီး သမီးလေးက လိုက်ရြာနေပၝတယ်။ သစ်ပင်တပင်ရဲႛ နောက်ကယ်ြကနေ သမီးလေးကို ကဋ္ဋန်မုကည့်နေမိပၝတယ်။ မဵက်ြိာံမြာ ခဵိသြာလတြဲ့အ္ဘပြံးကလေးနဲႛ အလန်ြခဵစ်စရာ ကောင်းလတြဲ့သမီးလေးဟာ ကဋ္ဋန်မကို ပေဵာ်ရင်ြစြာနဲႛ ဋ္ဌကြိးစားပန်းစား လိုက်ရြာနေပၝတယ်။ ကဋ္ဋန်မ ဆက်မပုန်ိးိုံင်တော့ပၝဘူး။ သမီးလေ ကဋ္ဋန်မကိုမန်ူမန်ရြာတြေႛစေလိုပၝတယ်။ သမီးလေးကို ကဋ္ဋန်မ့လက်ိံစ်ြဖက်နဲႛ ပြေႛဖက်္ဘပီး သူမမဵက်ြိာံလေးကို ထပ်ခၝထပ်ခၝ မြေးမြေးပေးလိုက်ခဵင်ပၝတော့တယ်။ သမီးလေးကို ကဋ္ဋန်မ ထကြ်ူပမယ်လိုႛ ဟန်ူပင်လိုက်ပၝတယ်။ ဒၝပေမယ့် သမီးလေးနားက အရိပ်ထဲမြာ ကုတ်အကဿဵီအနက်ဝတ်ထား္ဘပီး မဵက်ြိာံသေနဲႛ ရုပ်ဆိုးကမ်းတမ်းလတြဲ့ လူသုံးယောက်ကို ရုတ်ူခည်း တြေႛလိုက်ရပၝတယ်။ ကဋ္ဋန်မ နောက်ဆုတ်လိုက်ရပၝတယ်။ ကဋ္ဋန်မကို သမီးလေး ရြာတြေႛစေလိုပေမဲ့ သူတိုႛကိုတော့ ရြာမတြေႛစေလိုပၝဘူး။ အူပစ်ကင်းစင်လတြဲ့ အ္ဘပြံးလေးနဲႛ ကဋ္ဋန်မကို လိုက်ရြာနေတဲ့ သမီးလေးကို ကဋ္ဋန်မူမင်နေရပၝတယ်။ "အို - ကဋ္ဋန်မ ဘယ်လိုမြ ပုန်းအောင်းမနေိုံင်တော့ပၝဘူး။ အို … သမီးမေမေ ပုန်းမနေိုံင်တော့ဘူးကယြ်၊ မေမေကို သမီး ရြာလိုႛတြေႛလိုက်ပၝတော့။" ဒီနောက်မြာတော့ သူတိုႛတေကြ ကဋ္ဋန်မကို ဆြဲခေၞသြား္ဘပီး အသူတရာခေဵာက်ထဲကို ပစ်ခဵလိုက်ပၝတော့တယ်။ ကဋ္ဋန်မလည်း အိပ်မက်ဆိုးကနေ လန်ႛိုံးလာခဲ့္ဘပီး ကဋ္ဋန်မပၝူးပင်မြာ မဵက်ရည်စက်တခဵြိႛနဲႛ။ (၂) ကဵမသမီးလေးကို ခြဲခြာနေရတာ ခုဆိုရင် ဆယ်လနီးပၝး ရြိလာပၝ္ဘပီ။္ဘပီးခဲ့တဲိံ့စြ်ုသဂုတ်လမြာ ကဵမတိုႛအိမ်တံခၝးကို ညနက်သန်း ခေၝင်လာခေၝက်တဲ့အသံက ကဵမတိုႛရဲႛဘ၀တေကြိုေုကကြဲဖယြ်ေူပာင်းလဲစေခဲ့ပၝတယ်။ ကဵမအမဵြိးသား ကိုဂဵင်မီလိုႛ အသိမဵာုးကတဲ့ ကိုကေဵာ်မင်းယုကို စစ်အာဏာရင်ြတိုႛရဲႛ လုံ္ဘခံရြေးတပ်ဖြဲႛ၀င်တေကြ ၂၀၀၇-ခိုံစြ်ုသဂုတ်လ ၂၁ ရက်နေႛညမြာ ခေၞဆောင်သြားပၝတယ်။ ကေဵာင်းသားခေၝင်းဆောင်ဟောင်းတြေိံငြ့်ိုံင်ငံရေးအကဵဉ်းသားတြေ စုစည်းထား္ဘပီး "၈၈ မဵြိးဆက်ကေဵာင်းသားမဵား"လိုႛ ခေၞတဲ့ ထင်ရြား တဲ့အတိုက်အခံအုပ်စုမြာ သူဟာ ခေၝင်းဆောင်တယောက်ူဖစ်ပၝတယ်။ သိူံငြ့် အူခားခေၝင်းဆောင်မဵားကို သူတိုႛရဲႛအိမ်တေကြနေ ထို ညမြာပဲ အာဏာပိုင်မဵားက ဖမ်းဆီးခေၞဆောင်သြားပၝတယ်။ မတည်္ဘငိမ်မမြဵာူးဖစ်အောင် ဖန်တီးန္ဘေပီး အုံရကမြူဖစ်အောင် လြံႛဆော်ခဲ့ တယ်လိုႛ သူတိုႛအပေၞ အာဏာပိုင်တေကြ စပ်ြစြဲခဲ့ပၝတယ်။ ကဵမကိုယ်တိုင် ကေဵာင်းသားလပ်ြရြားမတြေမြာ ပၝ၀င်ခဲ့ဖူး္ဘပီိးိုံင်ငံရေးအကဵဉ်း သားလည်ူးဖစ်ဖူးတာမိုႛ ကဵမအမဵြိးသာိးံငြ့် သူႛအပေၝင်းအသင်းတေဟြာ စစ်အာဏာပိုင်တေရြဲႛ စစ်ေုကာရေးစခန်းတေမြာ ဘယ်လောက် အထြိံပ်စက်ညဉ်းပန်းခံရမယ်ဆိုတာ ကဵမ ကောင်းကောင်းသိရြိနေပၝတယ်။ ဒၝေုကာင့် ကဵမကို ဖမ်းဖိုႛ သူတိုႛ နောက်တခေၝက်လာတဲ့ အခဵိန်မြာ ကဵမဟာ သမီးလေးနဲႛအတူ ထကြ်ေူပးပုန်းအောင်းခဲ့ရပၝတယ်။ူမန်မာူပည်မြာ လတ်ြလပ်မြ၊ တရားမ္တွတမြိံငြ့် ဒီမိုကရေစီ ပေၞထနြ်းရေးအတကြ် အူခားရဲဘော်ရဲဘက်မဵာိးံငြ့်အတူ "၈၈ မဵြိးဆက်ကေဵာင်းသားမဵား"ကို ဦးဆောင်လပ်ြရြားမတြေကြို ကဵမတိုႛ ဆက်လက်ူပလြုပ်ခဲ့ပၝတယ်။ ကဵမ အဖမ်းမခံရပၝဘူး။ ဒၝပေမဲ့ ပုန်းအောင်းဖိုႛအတကြ် တနေရာကနေ တနေရာကို လ္တြွိႛ၀ကြ်ေူပာင်းရြေႛရ တာဟာ အလန်ြတရာ ခက်ခ္ဘဲပီး အသည်းထိတ်စရာပၝပဲ။ ဒီဒုက္ခတေကြို ကဵမသမီးလေးလည်း မ္တွဝေခံစားနေရတာ ကဵမ မုကည့်ရက်တော့ ပၝဘူး။ ဒၝေုကာင့်ုသဂုတ်လကုန်မတြော့ ကဵမရဲႛသုံးလအရယ်ြသမီးငယ်ကို ကဵမမိဘတေဆြီူပန်ပိုႛထားဖိုႛ ဆုံူးဖတ်လိုက်ရပၝတယ်။ ယခုအခဵိန်မြာ ကဵမ သမီးလေးကို အရမ်းလမြ်းနေပၝတယ်။ (၃) မိမိအိမ်မြိာံစ်ြပေၝင်းမဵားစြာ အထိမ်းသိမ်းခံနေရတဲ့ အန်တီရြိရာ တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းကို ကဵမရဲႛစိတ်တြေ ပဵံႛလငြ့်သြားပၝတယ်။ ကမ္တာဋ္ဌကီးတငြ် တဦးတည်းသော အကဵဉ်းကဵခံ္ဘငိမ်းခဵမ်းရေိးိုံဘယ်လ်ဆုရငြ် ဒေၞအောင်ဆန်းစုကည်ဟာ ဇန်ြလ ၁၉ ရက် သူမရဲႛ (၆၃)ိံစြ်ေူမာက်မြေးနေႛကို အထိမ်းသိမ်းခံဘ၀နဲႛ တဦးတည်း ကုန်ဆုံးရတော့မြာူဖစ်ပၝတယ်။ သူမ(အန်တီ)လည်း သာိးံစ်ြယောက်ကို သတိရမြာပၝပဲ။ သူမ(အန်တီ)ရဲႛ စိတ်ဓာတ်အင်အားဋ္ဌကံခိုင်မြိံငြ့် ခိုင်မာတည်ုကည်တဲ့ စိတ်ပိုင်ူးဖတ်မတြေဟြာ ကဵမကိုယ်တိုင်ိံငြ့်ူမန်မာူပည်က အမဵြိးသမီးမဵားစြာကို တရားမ္တွတမအြတကြ် ရပ်တည်လာုကဖိုႛ လမ်ူးပကူညီခဲ့ပၝတယ်။ ကဵမတိုႛရဲႛလပ်ြရြားမကြို ခေၝင်းဆောင်မပြေးခဲ့္ဘပီး ကဵမတိုနဲႛ တသြေးတည်းတသားတည်ူးဖစ်နေတဲ့ သူမ(အန်တီ)ကို ကဵမ ကေဵးဇူးအထူးတင်ပၝတယ်။ ကဵမတိုႛဟာ သူမ(အန်တီ)ရဲႛ သမီးတြေ သားတေလြိုဖစ်နေတာမိုႛ သူမ(အန်တီ)လည်း ကဵမတိုႛကို သတိရနေမြာပၝ။ ကဵမတိုႛတိုင်ူးပည်ကို အင်အားတ္ဘြေခိမ်းခေဵာက်မတြေ အုကမ်းဖက်မတြေသြုံး္ဘပီး အုပ်ခဵပ်ြနေတဲ့စစ်တပ်ေုကာင့်ူမန်မာူပည်က မိခင်တေနြဲႛ ကလေးတေဟြာ အတင်းအဓမ္ထ ခြဲခြာူခင်းခံနေုကရတယ် (၀မ်းနည်းစြာူဖင့် ကြဲကြာနေုကရတယ်) ဆိုတာကို သူမ(အန်တီ)ရဲႛ အူဖစ်အပဵက်တေကြ ကမ္တာသိအောင် မီးမောင်းထိုးပနေပၝတယ်။ (အန်တီဟာ ကမ္တာကို သတိပေးနေသလိုပၝပဲ။)္ဘငိမ်းခဵမ်းသောနည်းလမ်ူးဖင့် လတ်ြလပ်မြ၊ တရားမ္တွတမြိံငြ့် ဒီမိုကရေစီရေးအတကြ် ယုံကည်ခဵက်ခိုင်မာတဲ့ သူတိုႛရဲႛူပင်ူးပတဲ့ဆိံ္ဋတြေေုကာင့်ူမန်မာူပည်က မိခင်ပေၝင်း ထောင်ပေၝင်းမဵားစြာဟာ အသတ်ခုံကရ၊ ထောင်ခဵခုံကရ၊ ညဉ်းပန်ြးိံပ်စက်ခုံကရ၊ တိုင်ူးပည်ကနေ စနြ်ႛခြာထကြ်ေူပုးကရ၊ ပုန်းအောင်းနေုကရတာတြေ ရြိပၝတယ်။ (၄) တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပၝပဲ၊ ၂၀၀၈-ခိုံစြ် ဇန်ြလ ၁၉ ရက်နေႛမြာ နယူးယောက်ရြိ ကုလသမဂ္ဂလုံ္ဘခံရြေးကောင်စီတငြ် "အမဵြိးသမီး၊္ဘငိမ်းခဵမ်းရေိးံငြ့် လုံ္ဘခံရြေး" ဆိုတဲ့ခေၝင်းစဉ်နဲႛ ဆြေးြေိံးပြဲတခုကို ကဵင်းပပၝတော့မယ်။ ၂၀၀၀-ခိုံစြ် အောက်တိုဘာလက တညီင်္တီတြ် တည်း ဆုံူးဖတ်ခဲ့တဲ့ ကုလသမဂ္ဂလုံ္ဘခံရြေးကောင်စီဆုံူးဖတ်ခဵက် အမတြ် ၁၃၂၅ ကို အေူခခံ္ဘပီိးံစ်ြစဉ်ူပလြုပ်တဲ့ ဆြေးြေိံးပြဲပၝ။ အဲဒီ ဆုံူးဖတ်ခဵက်မြာ - လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခူဖစ်နေသည့်အေူခအနေမဵားတငြ် လိင်ကြဲူပားမအြပေၞအေူခခံသည့် အုကမ်းဖက်မမြဵား အထူး သူဖင့် မုဒိမ်းကဵင့်ူခင်း၊ အူခားသောပုံစံမဵြိူးဖင့် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ မတရာူးပကြဵင့်မမြဵာိးံငြ့် အူခား ပုံစံအမဵြိးမဵြိးသော အုကမ်းဖက်မမြဵား အားလုံးမြ အမဵြိးသမီးမဵာိးံငြ့် မိန်းခလေးမဵားအား အကာအကယ်ြပေိးိုံင်ရေးအတကြ် အထူးအရေးယူဆောင်ရက်ြမမြဵားကိုပလြုပ်ရန် လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတငြ် ပၝ၀င်ပတ်သက်နေသည့်အဖြဲႛအစည်းမဵားအားလုံးကို တိုက်တနြ်းသည်။ အမဵြိးသမီးမဵာိးံငြ့် မိန်ခလေးမဵား အပေၞတငြ် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အုကမ်းဖက်ူခင်ိးံငြ့်ဆိုင်သည့် အမမြဵားအပၝအ၀င် စစ်ရာဇ၀တ်မမြဵား၊ လူသားမဆန်သည့်ရာဇ၀တ်မမြဵား၊ လူမဵြိးစုသုတ်သင်သည့်ရာဇ၀တ်မမြဵားအတကြ် တာဝန်ရြိသူမဵား၊ ကဵြးလန်ြသူမဵားအား ဥပဒေမြ ကင်းလတ်ြခငြ့်ပေူးခင်းမဵြိးကို အဆုံးသတ် စ္ဘေပီး ဥပဒေေုကာင်းအရ အရေးယူရမည်။ ထိုကဲ့သိုႛ အရေးယူဆောင်ရက်ြရန်အတကြ် အဆင့်ဆင့်တာဝန်ရြိသူမဵား အားလုံးအနေူဖင့် တာဝန်ရြိနေေုကာင်းကို အလေးအနက်ူပထြားစေလိုသည်။ သိုႛအတကြ်ေုကာင့် လတ်္ဘြငိမ်းခဵမ်းသာခငြ့် ဥပဒေေုကာင်းမဵားအရ သက်သာ ပိုင်ခငြ့်မဵားပေးရာတငြ် အထက်ပၝရာဇ၀တ်မမြဵား အကဵြံးဝင်ူခင်း မရြိစေရန်အတကြ် လိုအပ်ေုကာင်း အလေးအနက် ထောက်ူပလိုသည်။ ထိုဆြေးြေိံးပြဲတငြ် သဘာပတိအူဖစ် အမေရိကန်ိုံင်ငူံခားရေးဝန်ဋ္ဌကီး ဒေၝက်တာကန်ြဒိုလီဇာရိုက်စ် ဆောင်ရက်ြလိမ့်မယ်လိုႛ မ္တွော်လင့် ပၝတယ်။ အမဵြိးသမီး၊္ဘငိမ်းခဵမ်းရေိးံငြ့် လုံ္ဘခံရြေး ဖြံႛ္ဘဖြိးတိုးတက်မတြေအြတကြ် ကမ္တာ့ခေၝင်းဆောင်တြေ အမဵားအူပား ပၝ၀င်ဆြေးြေိံုးက ပၝလိမ့်မယ်။ သူတိုႛတြေူမန်မာူပည်ကိင်္စကို ဆြေးြေိံုးကပၝ့မလား။ စစ်အာဏာရင်ြတေရြဲႛ ပုံစံအမဵြိးမဵြိးသော မတရာူးပကြဵင့်မြႛဒဏ်တေကြို ခံစားနေုကရတဲူ့မန်မာအမဵြိးသမီးတြေိံငြ့် ဒေၞအောင်ဆန်းစုကည်ကို သူတိုႛတြေ အမတ်ြရုကပၝ့မလား။ (၅) ယနေႛအခဵိန်အခၝတငြ် ပဋိပက္ခဋ္ဌကီိးံစ်ြခုမန်မိာိုံင်ငံမြာ ရြိပၝတယ်။ တခုကတောူ့မန်မိာိုံင်ငံရဲႛအရြေႛဖက်ူခမ်းမြာ အမဵားဆုံူးဖစ်ပဵက်နေသော တပ်မတော်ိံငြ့် တိုင်းရင်းသားအတိုက်အခံအင်အားစုမဵားအုကား တောက်လောင်နေဆဲ အိံစြ် ၅၀ ကေဵာ်ုကာခဲ့္ဘပီူဖစ်တဲူ့ပည်တငြ်းစစ်ူဖစ်ပၝတယ်။ ဒီတိုင်းရင်းသားဒေသတေကြ တိုင်းရင်းသူအမဵြိးသမီးတြေိံငြ့် မိန်းကလေးတြေ၊ တခဵြိႛဆိုရင် ဆယ်ိံစြ် အရယ်ြလောက်သာရြိသေးတဲ့ မိန်းကလေးတေဟြာ တပ်မတော်သားတေရြဲႛ အဓမ္ထူပကြဵင့်ူခင်းမဵားကို ခံနေရပၝတယ်။ အဲဒီတပ်မတော် သားတေဟြာလည်း သူတိုႛကဵြးလန်ြနေတာတေအြတကြ် ဥပဒေအရ အရေးယူခံရူခင်းမဵြိး မရြိပၝဘူး။ တပ်မတော်သားမဵားဟာ သူတိုႛရဲႛ စစ်ပင်္စည်းတြေိံငြ့် စားနပ်ရိက္ခာတြေ သယ်ယူဖိုႛအတကြ် အမဵြိးသမီးမဵားကို ပေၞတာအူဖစ်နဲႛ နေႛဖက်မြာ ခိုင်းပၝတယ်။ ညဖက်မြာတော့ လိင်ဖေဵာ်ေူဖဖိုႛအတကြ် ခိုင်းပၝတယ်။ သက်သေအထောက်အထားမဵားကို ဖေဵာက်ဖဵက်ဖိုႛအတကြ် ရက်စက်စြာ သတ်ူဖတ်ခုံကရူခင်ူးဖင့် အမဵြိးသမီးအမဵားစုဟာ ဆုံးပၝုးကရပၝတယ်။ နောက်ပဋိပက္ခဋ္ဌကီးကတော့္ဘငိမ်းခဵမ်းသောနည်းလမ်ူးဖင့် လတ်ြလပ်မြ၊ တရားမ္တွတမြိံငြ့် ဒီမိုကရေစီကို တောင်းဆိုနေုကတဲ့ လက်နက်မဲူ့ပည်သူပည်သားမဵာိးံငြ့် မိမိူပည်သူပည်သားမဵားကို လက်နက်အားကိုး အုပ်ခဵပ်ြနေတဲ့ စစ်အာဏာရင်ြမဵားအုကာူးဖစ်ပြားနေတဲ့ အိံစြ် ၂၀ုကာ တိုက်ပြဲပဲူဖစ်ပၝတယ်။ လပ်ြရြားသူအမဵြိးသမီးမဵားစြာဟာ ရိုက်ိံက်ြခုံကရ၊ ဖမ်းဆီးခုံကရ၊ ညဉ်းပန်းခုံကရ္ဘပီးနောက်မြာတော့ အကဵဉ်းထောင်မဵားထဲမြိာံစ်ြပေၝင်းမဵားစြာ ထိမ်းသိမ်းခုံကရပၝတယ်။ စစ်ဆေးမေူးမန်း သူတြေိံငြ့် ထောင်တာဝန်ရြိသူတိုႛရဲႛ မဖယ်ြမရာ စော်ကားမမြဵား၊ိုံင့်ထက်စီးနင်ူးပလြုပ်မမြဵားကို လပ်ြရြားသူအမဵြိးသမီး အမဵားအူပား ဋ္ဌကံတြေႛုကရပၝတယ်။ အမေူဖစ်သူကို ဖမ်းဆီိးိုံင်ဖိုႛအတကြ် အာဏာပိုင်တေဟြာ ကလေးတေကြို ဓားစာခံအူဖစ် အသုံးခဵတာတေလြည်း ရြိပၝတယ်။ အကဵဉ်းထောင်ထဲမြာ မိခင်နဲႛအတူရြိနေတဲ့ကလေးတြေ၊ အကဵဉ်းထောင်ထဲမြာပဲ မြေးဖြားတဲ့ကလေးတြေ အေူမာက်အမဵား ရြိပၝတယ်။ နာဂစ်ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းဒဏ်ိံငြ့် မုန်တိုင်းအ္ဘပီး ငတ်မတ်ြမတြေ ကူးစက်ရောဂၝတေနြဲႛ သေပၝလေ့စေဆ္ဘိုပီး စစ်အာဏာပိုင် တေကြ ပစ်ထားတာေုကာင့် ဆိုးဝၝးစြာ ဒုက္ခရောက်နေုကရတဲ့ လူဦးရေိံစ်ြသန်းခြဲအနက်မြာ အနည်းဆုံး တသန်းကေဵာ်ဟာ အမဵြိးသမီိးံငြ့် မိန်ခလေးတေပြၝ။ မုန်တိုင်းဘေးမြ အသက်အိံ္ဇရာယ်လတြ်ေူမာက်ခဲ့တဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင် သုံးသောင်းခြဲကေဵာ်မြာ အလန်ြတရာ စိုးရိမ်ရ တဲ့ အေူခအနေရြိတယ်လိုႛ ကုလသမဂ္ဂမြ ကဋ္ဋမ်းကဵင်သူတဦးက အခုရက်ပိုင်းအတငြ်းမြာေူပာဆိုခဲ့ပၝတယ်။ ဒၝပေမယ့်လည်း ဗိုလ်ခဵပ်ြဋ္ဌကီး တေဆြီက ကူညီစောင့်ရြောက်မကြတော့ သူတိုႛတြေ လုံးဝ မရုကပၝဘူး။ (၆) အခုဆြေးြေိံးပြဲအတငြ်းမြာ ဒေၝက်တာရိုက်စ်ိံငြ့် ကုလသမဂ္ဂလုံ္ဘခံရြေးကောင်စီမြ အူခားခေၝင်းဆောင်မဵားအနေနဲႛူမန်မာအမဵြိး သမီးတြေိံငြ့် ဒေၞအောင်ဆန်းစုကည်တိုႛအပေၞ အလေးအနက်ထား ဂရုပြုကလိမ့်မယ်လိုႛ ကဵမ မ္တွော်လင့်ပၝတယ်။ ဆုံူးဖတ်ခဵက် ၁၃၂၅ ဟာ ထူးခားတဲ့ တိုးတက်မတြခုပၝ။ ဒၝပေမယ့်လည်း ဒီဆုံူးဖတ်ခဵက်ကို အကောင်အထည်ဖေၞမြိံငြ့် အကဵြိးသက်ရောက်မရြိအောင် ဆောင်ရက်ြမတြေကြတော့ မေးခနြ်းထုတ်စရာူဖစ်နေဆဲပၝ။ အစိုးရကိုယ်ိံက်ြက လူႛအခငြ့်အရေးခဵြိးဖေၝက်သူဖစ်နေခဲ့ရင်၊ မုဒိမ်းမမြဵား ကဵြးလန်ြဖိုႛိံငြ့် လိင်ကြဲူပားမအြပေၞအေူခခံတဲ့ အုကမ်းဖက်မမြဵြိးကဲ့သိုႛသော လူသားမဆန်သည့်ရာဇ၀တ်မမြဵားကို ကဵြးလန်ြဖိုႛ င်္ီနြ်ုကား နေခဲ့သူဖစ်ခဲ့ရင် ကဵမတိုႛူမန်မာအမဵြိးသမီးတေကြို ဘယ်သူက အကာအကယ်ြပေုးကမြာလဲ။ သူတိုႛရဲႛဆိုးဝၝးလတြဲ့ကုံကမ္ထာကို ဘယ်သူက ကယ်တင်ပေးမြာလဲ။ ကလေးတြေိံငြ့် အမေတြေ ပေဵာ်ရင်ြစြာူပန်ပေၝင်းထုပ်ိုံင်ဖိုႛ ဘယ်သူက အာမခံဆောင်ရက်ြပေးမြာလဲ။ အခဵြိႛ္ဘဗိရြို ကရက်တေရြဲႛ "ပဵားရည်နဲႛ၀မ်းခဵ" တဲ့မူဝၝဒတေဟြာ အလန်ြရက်ြစရာပၝပဲ။ူမန်မာအမဵြိးသမီးတေကြို ခဵက်ခဵင်းလက်ငင်း ကူညီဖိုႛအတကြ် မူဖစ်မနေ လိုအပ်နေတာကတော့ ကုလသမဂ္ဂလုံ္ဘခံရြေးကောင်စီကနေ ထိထိရောက်ရောက်ိံငြ့် အလ္တွင်အူမန် အရေးယူ ဆောင်ရက်ြမပြဲူဖစ်ပၝတယ်။ ဆြေးြေိံးတာတြေ တော်ပၝတော့။ အရေးယူမတြေ စလုပ်ုကပၝတော့။ ကဵမသမီးလေးနဲႛ ကဵမ ပေဵာ်ရင်ြစြာူပန်လည်ဆုံစည်း ပၝ ရေ စႛ။ နီလာသိန်း၈၈ မဵြိးဆက်ကေဵာင်းသားမဵားရန်ကုန်၊ူမန်မိာိုံင်ငံ (မတ်ြခဵက် - မနီလာသိန်းအေုကာင်းပၝပဲ။ ကေဵာင်းသားခေၝင်းဆောင်ဟောင်းတယောက်ူဖစ်တယ်။ ရစ်ြလေးလုံးမြာ ပၝ၀င်ခဲ့တယ်။ ထောင် ကိုိးံစြ် ကဵခဲ့တယ်။ ထောင်က လတ်္ဘြပီးတဲ့နောက် ကိုဂဵင်မီိံငြ့် လက်ထပ်။ိံစ်ြယောက်စလုံး ၈၈ မြာ ပၝ။ သမီးလေးတယောက်ရြိ။ ကိုဂဵင်မီ အဖမ်းခံရ၊ မနီလာသိန်း ပုန်းရြောင်နေရ၊ သမီးလေးကို မိဘတေဆြီ ပိုႛထားရ။) ဒီဆောင်းပၝးက အဂဿလိပ်ဘာသာနဲႚ ဒီမြာ ပၝူပီးပၝူပီ။ူမန်မာဘာသာူပန် တင်ူပတာူဖစ်ပၝတယ်။ Who Will Save Burma's Women and Children? By Nilar TheinPublished on June 19, 2008 (The Nation)http://www.nationmultimedia.com/2008/06/19/opinion/opinion_30075891.php Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to Facebook